Ubuntu - A Big Change - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် » ..:: ကွန်ပျူတာနယ်ပယ် ::.. » Linux များ (သို့) Linux နှင့်ဆိုင်ရာများ
Ubuntu - A Big Change
Linux များ (သို့) Linux နှင့်ဆိုင်ရာများ Linux OS များအကြောင်း ဆွေးနွေးရန်နေရာပါ.. Linux OS အသုံးပြုပုံများ.. တွေ့ကြုံရသည့်အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးဝေမျှထားသည့်နေရာဖြစ်သလို သင်ကိုယ်တိုင်လည်းဝင်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်.
14-10-2011, 01:38 PM
Ubuntu 11.10 ထွက်ပါပြီ။ အရင် version နဲ့ တော်တော် ကွဲထွက်သွားပါတယ်။ အရမ်းကို ကောင်းလာတယ်လို့ ထင်မိတယ်။ ကျွန်တော် ကြိုက်တာလေးတွေ ပြောရရင် -
1. Login Window - 11.04 လို Gnome ကို ရွေးလို့မရတော့ပါဘူး။ Unity ကိုပဲ 3D, 2D ရွေးလို့ပဲ ရပါတယ်။ Gnome မရှိတော့လို့ စိတ်မပျက်သွားပါနဲ့။ အခု Unity က တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ 11.04 နဲ့ တခြားစီပါ။ Gnome ကိုတောင် မေ့ချင်မေ့သွားပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ Unity ကို တော်တော်ကြိုက်သွားပါတယ်။
2. Software Center က ပုံစံပြောင်းသွားပါတယ်။ Icon က အစ လုံးဝကို ပြောင်းထွက်သွားပါတယ်။ software တွေကို အလွယ်တကူ ရှာနိုင်သလို၊ ကိုယ့်စက်ထဲမှာ ရှိတဲ့ software တွေကိုလဲ categories အလိုက် ကြည့်လို့ရပါတယ်။ တော်တော်လေး သေသပ်တာပါ။ Software ရှာတာ၊ Installed Software, Installation Process, Update history စတဲ့ ၄ ခုကို Tab browsing ပုံစံမျိုး လုပ်ထားပေးပါတယ်။ တခုနဲ့ တခု ကူးရတော်တော် လွယ်တာ အမှန်ပါပဲ။
3. Dash & Launcher
Launcher ကလဲ တချို့လူတွေ သိပ်မသုံးတဲ့ Application ရွေးတဲ့ဟာ တစ်ခုကို ဖြုတ်ပြီး၊ မကြာခဏ သုံးတတ်တဲ့ system setting ကို default တင်ထားပါတယ်။ နောက် Dash Icon ကို နှိပ်ရလွယ်အောင် အကြီးကြီး လုပ်ထားပေးပါတယ်။
Dash ကတော့ သိသိသာသာ ကောင်းလာပါတယ်။ Dash ကို ဝင်လိုက်ရင် Shortcuts, Applications, Folders, Music ဆိုပြီး Tab4မျိုးခွဲသွားပါတယ်။ (tab အစစ်တော့မဟုတ်ပါဘူး၊ tab function လုပ်ပေးတဲ့ icon ၄ ခုပါ။ Lens လို့ဆိုပါတယ်။)
a. Shortcuts - အရင် Dash အဟောင်းပုံပါ။ browser, photo manager, email, music player စတဲ့ ၄ခု အဓိက ရှိပါတယ်။
b. Applications - ဒီ lens ကနေ softwares တွေကို အလွယ်တကူ access လုပ်လို့ရပါတယ်။ အရင်ကနဲ့ မတူတဲ့ ပိုကောင်းတဲ့ ပုံစံနဲ့ filters တွေပါလာပါတယ်။ Internet, Office, system, Games, accessories စသဖြင့် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ filter အလိုက် အလွယ်တကူ software ရှာလို့ရပါတယ်။ အသုံးများတဲ့ software, installed software, download ထပ်လုပ်လို့ရတဲ့ software စသဖြင့် အရင်ကအတိုင်းပါပဲ။ Filter ပါလာတော့ အရမ်းကို အဆင်ပြေပါတယ်။
c. files and folders - files, folders အလွယ်တကူ ရှာလို့ရပါတယ်။ အရင်ကထက် ပိုကောင်းတာက filter ပါပဲ။ videos, audio, images, documents, presentations, folders စသဖြင့် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ file အမျိုးအစားလိုက် အလွယ်တကူ ရှာလို့ရပါတယ်။ နောက်ပြီး file size filter လဲရှိပါတယ်။ 1MB, 10MB, 100MB, 1GB, >1GB စသဖြင့် filter အမျိုးမျိုးသုံးပြီး ရှာလို့ရပါတယ်။ နောက် modified date နဲ့ ရှာနိုင်တဲ့ filter လဲပါပါတယ်။
(တချို့တွေက files & folders တွေကို gnome မှာလို အလွယ်တကူ သွားလို့မရဘူး ထင်ကောင်းထင်ပါမယ်။ 3D Unity သုံးထားရင် အရင် gnome အတိုင်း desktop မှာ အပေါ်ဆုံးက panel bar ကို မြှားထောက်လိုက်ရင် bookmarks ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ documents, downloads, pictures, music စတဲ့ folders တွေကို အလွယ်သွားနိုင်ပါတယ်)
d. Music - တကယ်ကောင်းတဲ့ lens ပါ။ အင်တာနက် ချိတ်ထားရင် ကိုယ့်ကွန်ပျူတာထဲ မရှိပေမဲ့၊ အင်တာနက်က သီချင်းတွေကို Dash ကနေ ရှာလို့ရပါတယ်။ Ubuntu One Music store နဲ့ ချိတ်ထားတာပါ။ အများစုက သီချင်းကို ဝယ်မှာလဲ မဟုတ်တော့ မပြောတော့ပါဘူး။
4. Nautilus file manger - Tab browsing လုပ်လို့ရပါတယ်။ တော်တော် အဆင်ပြေတာတော့ အမှန်ပါပဲ။
5. Unicode keyboard - Ubuntu မှာ ဟိုးအရင်ကတည်းက မြန်မာ keyboard ပါပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်ကွက်တွေက တလွဲတွေပါပဲ။ zawgyi နဲ့လဲ ဖတ်မရ၊ ယူနီကုတ်နဲ့လဲ ဖတ်မရပါ။ 11.10 မှာတော့ ယူနီကုတ် keyboard ပါ။ http://mysteryzillion.org/project/webtext/webtext.htm က layout နဲ့ ဆင်ဆင်တူပါတယ်။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသေချာပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် Ubuntu ကနေ ရိုက်တာကို Windows မှာ ဖတ်လို့ရပါတယ်။ ဟုတ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ 11.04 မှာ စပြောင်းတာလား၊ အခုမှ ပြောင်းတာလား သိချင်ပေမဲ့ 11.04 ISO ကို ဖျက်လိုက်မိတော့ စမ်းလို့မရတော့ပါ။ Linux Mint 11 မှာတော့ မပါသေးဘူး။ 11.04 သုံးနေတဲ့သူများ သိရင်ပြောပေးပါဦး။
ဒီလောက်ပါပဲ။ ဒါပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြောင်းသွားတာ တော်တော်များပါတယ်။ ကျွန်တော့်စက်မှာ နည်းနည်းနှေးပေမဲ့ သုံးရတာ တော်တော် အဆင်ပြေပါတယ်။ ပုံစံပြောင်းသွားလို့ တချို့ဟာတွေ ရှာမတွေ့တာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ Restart button ကို shutdown နှိပ်ပြီးမှ နှိပ်လို့ရတာ။ screen brightness ကို အရင်ကလို power option ထဲ မဝင်ရပဲ Dash မှာ screen လို့ ရိုက်ပြီး ပြင်ရတာ စတာတွေပေါ့။ စမ်းသုံးကြည့်ပြီး ကိုယ်တွေ့တာလေးတွေကို ဝိုင်းဖြည့်ပေးဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကြိုက်တယ်၊ မကြိုက်ဘူး။ ဘာက ဘယ်လိုကောင်း၊ ဘယ်လိုမကောင်း စသည်ဖြင့်ပေါ့။ အချိန်ရှိခဲ့လို့ နားလည်လွယ်အောင် ပုံလေးတွေနဲ့ ပြချင်ရင် အထူးကျေးဇူးပါ။
beta version ကို Review လုပ်ထားတာ ဖတ်ချင်ရင် u4mm.com မှာ သွားဖတ်ပေးပါ။ တော်တော် ကောင်းပါတယ်။
Last edited by g00gle; 20-10-2011 at 10:46 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 21 ဦးတို့မှ g00gle အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဂျိန်း, နီထွန်းဦး, မျိုးဟန်ထက်, သန့်ဇင်ဌေး, မောင်သံသရာ, အောင်စိုးကြည်, အောင်လံလေး, amaung344, asulike88, bagothar85, bonge, htoo war, iPod, ko lin, kyawminkhoung, KznT, lu soe, Pho Sel, phoelapyaee, putty, Zin Zin Win
20-10-2011, 07:24 AM
ပြန်စာ - Ubuntu 11.10 - A Big Change
Windows လိုင်စင်မဲ့ သုံးလို့ ဖမ်းတာ၊ ပြုတာရှိခဲ့ရင် Ubuntu ကို ပြောင်းသုံးကြည့်စေချင်တယ်။ သာမန်သုံးရုံလောက်ဆို Windows အစားသုံးလို့ရတာ အမှန်ပါပဲ။ Install လုပ်တာလဲ လွယ်ပါတယ်။ Partition မခွဲတတ်ပဲတောင် Install လုပ်လို့ရပါတယ်။ ကွန်ပျူတာ တခုခုဖြစ်သွားမှာစိုးရိမ်တယ် ဆိုရင်လဲ Wubi Installer နဲ့ စမ်းသုံးကြည့်လို့ရပါတယ်။ Wubi နဲ့ သုံးရင် software ကို Install လုပ်သလို Install လုပ်ပြီး၊ Restart တစ်ခါ လုပ်ပေးရုံပါပဲ။ အဲလောက်လွယ်တယ်။ Ubuntu မကြိုက်ဘူးဆိုရင်လဲ software uninstall လုပ်သလို Ubuntu ကို uninstall လုပ်ပေးရုံပါပဲ။ Wubi နဲ့ သုံးလို့ ကြိုက်သွားရင် Partition တစ်ခုနဲ့ သီးသန့် Install လုပ်မလား။6လ တစ်ကြိမ် အသစ်ထွက်နေလို့ Wubi နဲ့ပဲ သုံးမလား။ သဘောပါပဲ။
သူများတွေ ဘယ်လိုလုပ်လဲတော့ မသိဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ Ubuntu စသုံးပြီးဆို System Settings ကို အရင်ပြင်လေ့ရှိတယ်။ အမှန်တိုင်းတော့ Update အရင်လုပ်၊ Restricted Drivers သွင်းတာမျိုးလုပ်သင့်တာပါ။
System Settings ကို ဝင်ဖို့အတွက် ၂ နည်းရှိပါတယ်။ ဘယ်ဘက်က Launcher မှာရှိတဲ့ ခွေးသွားစိတ်က ဝင်တာ၊ သို့မဟုတ် ညာဘက်အပေါ်ထောင့်မှာ ရှိတဲ့ ခွေးသွားစိတ်ကို နှိပ်ပြီးဝင်တာ။
System settings ကို ဝင်လိုက်ရင် ဒီလိုတွေ့ရမယ်။ အရင်ကထက် အမြင်ပိုရှင်းသွားတယ်လို့ထင်တယ်။ Personal, Hardware, System ဆိုပြီး အဓိက ၃ ပိုင်းခွဲထားပါတယ်။
1. Appearance - ဆိုတာကတော့ Desktop Background, Wallpapers, Themes တွေပြောင်းတဲ့နေရာပါ။ အရင် Version ထက် Theme နည်းသွားတယ်လို့ ထင်မိတယ်။ Wallpapers တွေကတော့ တော်တော်လေးကို လှပါတယ်။
2. Keyboard Layout - မှာတော့ English မဟုတ်တဲ့ တခြားဘာသာတွေကို ရိုက်ဖို့ လက်ကွက်တွေ ထည့်နိုင်ပါတယ်။ မြန်မာယူနီကုတ် Layout လဲပါလာပါတယ်။
3. Language Support - ကို ဝင်လိုက်ရင် Language နဲ့ Regional Format ဆိုပြီး Tabs ၂ ခု တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ Burmese Language Pack တွေကို Software Center က သွင်းထားမယ်ဆိုရင် Menu တွေမှာ မြန်မာစာကို ပေါ်အောင် လုပ်လို့ရပါတယ်။ အရောင်မှိန်နေတဲ့ Burmese ဆိုတာကို Drag လုပ်ပြီး အပေါ်ရောက်အောင် လုပ်ပေးရုံပါပဲ။ Regional Format မှာ Burmese ကို ထားမယ်ဆိုရင်တော့ နေ့စွဲ၊ နာရီ၊ Currency စတာတွေမှာပါ မြန်မာလိုပေါ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Translate လုပ်ပေးသူများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
4. Online Accounts - Google account နဲ့ချိတ်ဆက်လို့ ရပါတယ်။ မှန်တာပြောရရင် Mail, Calendar, Chats, ... စသဖြင့် ရေးထားပေမဲ့ ကျွန်တော်သုံးလို့မရပါဘူး။ Updates တွေမှာ Fix လုပ်ပေးဖို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
5. Screen - Screen Brightness ကိုချိန်လို့ ရပါတယ်။ ကွန်ပျူတာမသုံးတာ ဘယ်လောက်ကြာရင် Screen ကိုပိတ်မလဲ စသဖြင့် ပြင်လို့ရပါတယ်။ ထူးဆန်းတာက Screen Saver မပါလာတာပဲ။ မီတာခ သက်သာသာပေါ့။
6. Network - သူ့မှာတော့ Wired, Wireless နဲ့ Internet ချိတ်ဖို့ Settings တွေပါပါတယ်။ Proxy နဲ့သုံးနေရတယ်ဆိုလဲ Network Proxy ကနေ ဝင်ပြင်လို့ ရပါတယ်။
7. Power - Power Options ပြင်တာပါ။ Laptop အဖုံးပိတ်ရင် ဘာလုပ်မလဲ စသည်ဖြင့်ပြင်လို့ရပါတယ်။
8. Removable Media - USB Stick, CD ထည့်လိုက်ရင် Autoplay လုပ်မလား၊ မလုပ်ဘူးလား ရွေးပေးလို့ရပါတယ်။
9. Time & Date - ကွန်ပျူတာ အချိန်ကို ပြင်လို့ရပါတယ်။ လိုအပ်ရင် Clock Tab ကို နှိပ်ပြီး Time in other locations ကနေ နာရီအပိုထပ်ထဲ့လို့ ရပါတယ်။
10. တခြား Settings တွေလဲ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ ကိုယ်တိုင်လေ့လာကြည့်ပါ။ သိပ်မခက်လှပါဘူး။ Dropbox လိုမျိုး Online Storage ဖြစ်တဲ့ Ubuntu One လဲ ပါပါတယ်။ 5GB Free ပါ။ Folder Sync လဲ ရပါတယ်။
Settings တွေမှာ ဘာပါလဲ သိရင် ကိုယ့်ကွန်ပျူတာသုံးဖို့ လွယ်တာတော့ အမှန်ပဲ။ ဒီ post ကတော့ Tips & Tricks တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာတွေပါလဲ သဘောကျလာအောင် Screenshots လေးတွေ ထုတ်ကြွားရုံလောက်ပါပဲ။ Page Loading နှေးသွားရင်တော့ သည်းခံပေးပါ။
Last edited by g00gle; 20-10-2011 at 07:32 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 23 ဦးတို့မှ g00gle အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဂျိန်း, နီထွန်းဦး, မျိုးဟန်ထက်, သန့်ဇင်ဌေး, အယ်သား, အောင်လံလေး, ငြိမ်းချမ်း, amaung344, asulike88, bagothar85, iPod, ko lin, kyawminkhoung, KznT, lu soe, mmkyioo, nightman, nyeinsaeya86, phoelapyaee, smooth gut, thureinsoe, tu tu, waihtutpai
22-10-2011, 07:05 AM
System Settings ပြင်ပြီးသွားရင် မြန်မာ Fonts သွင်းဖို့ ပြင်ကြတာပေါ့။ Windows မှာ Font သွင်းသလိုပဲ Ubuntu မှာ Font သွင်းရတာလဲ အလွန်လွယ်ပါတယ်။ Font ကို Right Click >> Open with font viewer နဲ့ဖွင့်ရုံပါပဲ။ Double-click နှိပ်ပြီး ဖွင့်လို့လဲ ရပါတယ်။
Font Viewer နဲ့ပွင့်လာတဲ့အခါ ညာဘက်အောက်နားမှာ ရှိတဲ့ Install Font ကို နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ ဒါဆို Font သွင်းတာ ပြီးသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနည်းနဲ့ အလွယ်တကူ fonts သွင်းလို့ရတယ် ဆိုပေမဲ့ Fonts အများကြီးကို တပြိုင်နက်သွင်းချင်တဲ့အခါ အခက်အခဲ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအခါ တခြားနည်းတခုနဲ့ အလွယ်တကူ သွင်းနိုင်ပါသေးတယ်။ ပထမဆုံး Home Folder ကို သွားရပါမယ်။
Home Folder ကို သွားဖို့ Launcher မှာရှိတဲ့ Home Folder Icon လေးကို နှိပ်နိုင်သလို။ Dash Home button လေးကို နှိပ်ပြီး Home လို့ ရိုက်ထဲ့ကာ Home Folder ကို သွားနိုင်ပါတယ်။ (၃ လုံးပဲ ရိုက်ချင်ရင် hom နဲ့ဆို Home တွေ့ရမှာပါ)
ဒါမှမဟုတ် Home Folder ကို တခြားနည်းတခုနဲ့ သွားလို့ရပါသေးတယ်။ Desktop ကိုသွားပြီး Mouse Pointer မြှားလေးကို Screen ထိပ်ကို ရွှေ့လိုက်ပါ။ File, Edit, View, Bookmarks, Go, Help စသဖြင့် အရင်က Menu Bar လေး ကိုတွေ့ရပါမယ်။ Go >> Home ကနေ Home Folder ကို သွားလို့ရသလို၊ Alt+Home keyboard shortcut နဲ့လဲ သွားလို့ရပါတယ်။ နောက်တကယ်လို့ Menu Bar ကိုမတွေ့ရရင်လဲ စိတ်မပူပဲ Screen ထိပ်ကို မြှားလေးထောက်ကြည့်ပါ။
Home Folder ကို ရောက်သွားရင် မြှားကို Screen ထိပ်ကိုရောက်အောင် ရွှေ့ပြီး Menu Bar တွေ့အောင် လုပ်ပါ။ နောက် View >> Show Hidden Files ကို နှိပ်ပါ။
Show Hidden Files ကို နှိပ်လိုက်ရင် Home Folder ထဲမှာ Files တွေ၊ Folders တွေအများကြီး ထွက်လာပါမယ်။ အဲဒီထဲမှာ .fonts ဆိုတဲ့ Folder ရှိမရှိ ကြည့်ပါ။ မရှိဘူးဆိုရင်လဲ Right Click >> Create Folder လုပ်ပြီး နာမည်ကို .fonts လို့ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ကိုယ်သွင်းချင်တဲ့ Fonts ကို .fonts ဖိုဒါထဲ Copy, Paste လုပ်လိုက်ရင် ရပါပြီ။
ဒါဆို Fonts သွင်းလို့တတ်ပြီ။ Menu Bar ဘယ်မှာလဲ သိပြီ။ ကိုယ်သွားချင်တဲ့ Folder ကို ဘယ်လိုသွားရမလဲ သိပြီ ထင်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 15 ဦးတို့မှ g00gle အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဂျိန်း, မျိုးဟန်ထက်, သန့်ဇင်ဌေး, ငြိမ်းချမ်း, amaung344, asulike88, bagothar85, iPod, kyawminkhoung, KznT, mmkyioo, mr.jittwo, nightman, nyeinsaeya86, phoelapyaee
ပြီးရင် လုပ်သင့်တာက လိုအပ်တဲ့ Restricted Drivers ကိုသွင်းတာ၊ Update လုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Internet ရှိဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။ Restricted Drivers ကို Install လုပ်ဖို့အတွက် Post No.2မှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း System Settings ကို ၀င်ပါ။ ပြီးရင် Additional Drivers ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ Restricted Drivers ရှိခဲ့ရင် ဒီလိုမျိုးတွေ့ရပါမယ်။ Activate ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ လိုအပ်တာကို Internet က ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး Install လုပ်သွားပါမယ်။
Drivers တွေ သွင်းပြီးသွားရင် Update လုပ်ပါမယ်။ Update မလုပ်ခင် ပြင်စရာ နည်းနည်း ရှိပါတယ်။ ပထမဆုံး Dash Home button ကို နှိပ်ပြီး Software Sources လို့ရိုက်ထဲ့လိုက်ပါ။ Software Sources ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒီလိုတွေ့ရပါမယ်။ ဒါက ကိုယ် download လုပ်မယ့် Softwares တွေကို ဘယ်နေရာက Download လုပ်မလဲ ရွေးပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ Ubuntu Software ဆိုတဲ့ Tab မှာ အဓိက softwares4မျိုးရှိတာ တွေ့ရပါမယ်။
1. main - Ubuntu ရဲ့ partner Canonical ဆိုတဲ့ Company က Support လုပ်တဲ့ softwares တွေပါ။
2. universe - Canonical မဟုတ်ပဲ တခြား Ubuntu ရဲ့ Partner Companies တွေက support လုပ်တဲ့ softwares တွေပါ။
3. restricted - Graphic card၊ Wireless Card စတဲ့ အရာတွေအတွက် proprietary drivers တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကြတော့ မူလ Companies က Ubuntu ကို Install လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်လို့မရ၊ ပြင်ဆင်ခြင်တိုင်း ပြင်ဆင်ခွင့် မပေးထားပါဘူး။ ဒါကြောင့် Ubuntu Installation လုပ်စဉ်က မပါလာပဲ ကိုယ်တိုင် Install လုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
4. multiverse - တချို့နိုင်ငံတွေမှာ Copyright နဲ့ ညှိနေတဲ့ Softwares လေးတွေပါ။
ဒီ softwares တွေထဲက ကိုယ်ကြိုက်တာရွေးပြီး download လုပ်ပါမယ်။ အကုန်လုံး ရွေးတာ အကောင်းဆုံးပါ။ နောက် Download လုပ်မဲ့ Server ကို ရွေးပေးပါမယ်။ နဂိုကတည်းက ရွေးပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ ကိုယ်နေတဲ့ နေရာနဲ့နီးတဲ့ Server ကနေ download လုပ်သင့်ပါတယ်။
Other Softwares ဆိုတဲ့ Tab ကို နှိပ်လိုက်ရင်တော့ Ubuntu က ထောက်ပံ့တဲ့ တခြား Softwares တွေရဲ့ Sources ကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒီမှာကြတော့ universe တွေ၊ multiverse တွေ မခွဲထားတော့ပဲ ဘယ် source ကနေ download လုပ်မလဲ ရွေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Canonical Partners, Independent တို့ကို အမှန် ခြစ်ထားပေးပါက softwares များများ download လုပ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ softwares သို့မဟုတ် Updates ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးနေတဲ့ PPA Software Sources တွေကတော့ Canonical Partners ထဲလဲ မပါ၊ Independent ထဲလဲ မပါဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သူတို့အတွက် သီးခြား Software sources ကို ထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ Add ဆိုတဲ့ ခလုပ်ကို နှိပ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ software ရဲ့ Websites မှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း စာကြောင်းတစ်ကြောင်းကို APT Line ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ရိုက်ထည့်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ပြီးရင် Add Source ကို နှိပ်ပေးပါ။
သီးခြား software sources တွေကို ထည့်တဲ့အခါ တခါတလေ APT line မှာ ထည့်ပေးရတဲ့အပြင် အဲဒီ software sources နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Authentication Key file ကိုလဲ ထည့်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ software ရဲ့ Website ကနေ Authentication Key file ကို download လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ပြီးရင် Import key file ကို နှိပ်ပြီး ဖိုင်ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။ Google လိုမျိုး company ကတော့ softwares sources ရော၊ key file ကိုပါ တခါတည်း အလိုလို ထည့်ပေးနိုင်အောင် software ရေးထားပေးပါတယ်။
ပြီးရင် Updates ဆိုတဲ့ Tab ကနေ ဘယ်လောက်တခါ Update လုပ်ချင်လဲ ရွေးပေးလို့ ရပါတယ်။
Statistics ကတော့ ကိုယ်ဘာ Softwares သုံးနေလဲ Ubuntu ကို အချက်အလက် ပို့ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်က Ubuntu softwares ပိုကောင်းလာဖို့ တဖက်တလမ်းက ကူညီစေချင်တယ်။ Privacy နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆို ကူညီပေးလို့ ရပါတယ်။
လိုအပ်တဲ့ softwares sources တွေကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးသွားရင် Software Sources ဆိုတာကို ပိတ်လိုက်ပါ။ Dash Home ကနေ Update Manager လို့ရိုက်ထည့်ပြီး Update Manager ကို ၀င်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Check ဆိုတာကို နှိပ်ပြီး ခဏစောင့်ပါ။ Updates ဘယ်လောက်ရှိလဲ။ ဘယ် Size လဲ ဆိုတာ တွေ့ရပါမယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Updates တွေကို ရွေးပြီး Install ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ဒါဆို Update လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်နေပါပြီ။ Launcher မှာလဲ Update ဘယ်နှခု လုပ်နေလဲ။ ဘယ်လောက်ပြီးနေပြီလဲ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဒီမှာ သတိထားဖို့က Update လုပ်နေစဉ် softwares တွေမသုံးသင့်ပါဘူး။ လုံးဝမသုံးရဘူးလို့ မဟုတ်ပေမဲ့ မသုံးပဲ ခဏစောင့်လိုက်တာက Update Error နည်းပါးစေပါတယ်။ လုံးဝမသုံးရမဲ့ applications တွေကတော့ software center, synaptic package manager, debi installer, terminal မှ softwares သွင်းတာတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Wubi Installer နဲ့ သုံးထားတဲ့ Ubuntu မှာ Update လုပ်လို့ရသလားလို့ မေးရင် ရပါတယ်လို့ပဲ ဖြေပါမယ်။ Updates လုပ်ရင်း ပျက်သွားရင် ဘာဖြစ်နိုင်လဲ။ Update files တွေကို download လုပ်စဉ် ပျက်သွားရင်တော့ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး။ နောက်တခါ Update လုပ်ရင် အရင်ကျန်နေတဲ့ နေရာက ဆက်ပြီး download လုပ်နေမှာပါ။ Install လုပ်ရင်း ပျက်သွားရင်တော့ စိုးရိမ်ရပါတယ်။ အခန့်မသင့်ရင် system တစ်ခုလုံး လုံးဝ သုံးလို့မရဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Updates လုပ်စဉ် Error နည်းဖို့ Update ကလွဲလို့ တခြားဘာမှ မသုံးစေချင်ပါ။ ဒါဆို Ubuntu Update လုပ်ငန်းစဉ်ကို အကြမ်းသိပြီ ထင်ပါတယ်။
Last edited by g00gle; 26-10-2011 at 05:27 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ g00gle အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
သန့်ဇင်ဌေး, amaung344, asulike88, bagothar85, iPod, kyawminkhoung, KznT, lu soe, mmkyioo, phoelapyaee
23-10-2011, 02:42 AM
Ubuntu မှာ ရှိတဲ့ File Manager ကို ပြောပါမယ်။ နာမည်ကတော့ Nautilus File Manager ဖြစ်ပါတယ်။ Windows Explorer နဲ့ ဆင်ပါတယ်။ Ubunu မှာတော့ My Computer အစား Home Folder ကို သုံးပါတယ်။ Home Folder ကို သွားချင်ရင် Post No.3အတိုင်း သွားနိုင်ပါတယ်။ Home Folder ကိုရောက်ရင် ဒီပုံအတိုင်း တွေ့ရပါမယ်။
ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ Devices, Computer ဆိုပြီး တွေ့ပါမယ်။ Devices ဆိုတာက ကိုယ့်ကွန်ပျူတာမှာ ရှိတဲ့ Partitions တွေ၊ USB Stick တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ Windows မှာလိုပဲ Home Folder အောက်မှာ Desktop, Documents, Music, Pictures, Videos, Downloads ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ ဒီ Folders တွေက Main folders တွေဖြစ်ပြီး Ubuntu One နဲ့ အလွယ်တကူ Sync လုပ်လို့ရပါတယ်။ Windows နဲ့မတူတာက File System ဆိုပြီး Partition လိုပုံစံမျိုး တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ထဲမှာ Ubuntu အတွက် အရေးကြီးတဲ့ system files တွေပါပါတယ်။ Windows C: ထဲမှာ system files တွေပါသမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Windows နဲ့ကွာတာက Ubuntu မှာ system files တွေမှားဖျက်တာမျိုး မဖြစ်ရအောင် လုပ်ထားပါတယ်။ File System ထဲက Files တွေကို သာမန် user တွေက ဖျက်လို့မရအောင်၊ အသစ်ထပ်ထည့်မရအောင် လုပ်ထားပါတယ်။ System files ပြင်ဖို့လိုအပ်လာပြီဆိုမှ Super user အနေနဲ့ သုံးပြီး System files ကို ၀င်ပြင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (Files တွေကို File System Partition ထဲ မထည့်ထားစေချင်ပါဘူး။ System Files တွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် Files ထဲ့လို့မရတာ၊ ဖျက်လို့မရတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Home Folder အောက်မှာပဲ Files, folders ကို ကိုယ် Hard Disk Space ရှိသလောက် ထည့်လို့ရပါတယ်၊ Partition မြင်ရမှ ကျေနပ်တယ်ဆိုရင် သီးသန့် Partition တစ်ခုလုပ်ပေးဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။)
Ubuntu မှာ Windows Explorer ထက်ပိုကောင်းတာက File Manager ကို Tab တွေနဲ့ ဖွင့်လို့ရတာပါပဲ။ Folders ကို Right click >> Open with new tab ဆို Tab တွေနဲ့ တွေ့ရမှာပါ။ နောက် Menu bar ကို ၀င်လိုက်ပြီး View >> Extra Pane ဆို အဲဒီ Windows တစ်ခုထဲမှာပဲ နောက်ထပ် Pane တစ်ခုနဲ့ Folders တွေ ယှဉ်ကြည့်လို့ရပါသေးတယ်။
ဒီလိုနည်းနဲ့ မယှဉ်ချင်ရင် Snapping Tool ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ Windows တစ်ခုကို Drag လုပ်ပြီး ဘယ်ဘက်၊ သို့မဟုတ် ညာဘက်အစွန်ကို Drag လုပ်ကြည့်ပါ။ လိမ္မော်ရောင် အကွက်လေး ပေါ်လာရင် Drag လုပ်တာကို လွှတ်လိုက်ပါ။ ဒါဆို Windows ရဲ့ ဘယ်တခြမ်း သို့မဟုတ် ညာတခြမ်းမှာ ညီညီညာညာ ဖြစ်သွားမှာပါ။ Windows မှာတော့ ဒါကို Aero Snap လို့ခေါ်ပါတယ်။
ဘယ်ညာ၊ မဆွဲပဲ အပေါ်ကို Drag လုပ်သွားရင် Screen တစ်ခုအပြည့် Maximize လုပ်ပေးပါမယ်။ နောက်ပိုလွယ်ကူတဲ့နည်းက title bar ကို double click လုပ်ပေးတာပါ။
တခါတလေ Ubuntu မှာ Scroll bar မပါဘူး ထင်စရာရှိတယ်။ မပါတာမဟုတ်ပါဘူး။ အမြင်မရှုပ်ရအောင် ခဏဖျောက်ထားတာပါ။ Windows ရဲ့ ညာဘက်ထောင့်ကို ကြည့်ရင် လိမ္မော်ရောင် အတန်းလေး ရှိပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီနေရာကို မြှားထောက်လိုက်ရင် Scroll Bar ပေါ်လာပါမယ်။ အပေါ်၊ အောက် ခလုပ်ကို နှိပ်လို့ရသလို၊ Drag လုပ်လို့လဲ ရပါတယ်။
စက်က နည်းနည်းမြန်တယ်ဆို Workspace Switcher ကို သုံးကြည့်ပါလို့ အကြံပေးပါတယ်။ Workspace တစ်ခုမှာ အလုပ်တစ်ခုလုပ်၊ နောက်တစ်ခုမှာ တခြား software တစ်ခုသုံးနဲ့ သေသေသပ်သပ် ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ မဖြစ်စလောက် File Manager Reviews က ဒီလောက်ပါပဲ။ အရင်ကတော့ File Manager ထဲပါတဲ့ Search က အရမ်းကောင်းပါတယ်။ အခုကျွန်တော့်ဆီမှာ ကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်ဖြစ်နေသလိုပဲ။
Last edited by g00gle; 26-10-2011 at 02:36 AM..
နီထွန်းဦး, သန့်ဇင်ဌေး, အောင်စိုးကြည်, amaung344, asulike88, bagothar85, Bayint Naung, htoo war, iPod, kyawminkhoung, KznT, mmkyioo, phoelapyaee, tu tu, zo
23-10-2011, 08:26 PM
ပို့စ် 1,332 ခုအတွက် 20,394 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Ubuntu 11.10 အိပ်မက်လေးတော့ မက်ချင်ပေမယ့် မမက်ဖြစ်တော့ပါဘူး ကိုဂူရေ- ကျွန်တော်နဲ့ ကွန်ပြူတာ - ကွန်ပြူတာနဲ့ ကျွန်တော် - ခုချိန်မှာ လားလားမှကို မအပ်စက်တော့သလို ဖြစ်သွားပါပြီ - ဒါပေမယ့်လည်း Linux ကိုချစ်တဲ့ စိတ်ကလေး ရှိနေသေးတော့ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် အိမ်မှာ အင်တာနက်ချိတ်နိုင်ပြီး ၁ စက္ကန့်ကို ၂ မက်လောက် ကျနိုင်မယ့် နေ့ရောက်ရင် ကျွန်တော် ပြန်သုံးကြည့်ပါဦးမယ် - ဟိုတစ်လောက ကျွန်တော့်ညီတစ်ယောက် Ubuntu သုံးကြည့်ချင်တယ်လို့ ပြောတော့ "အကိုတော့ အဲ့တာတွေနဲ့ အဆက်ပြတ်ခဲ့တာ ကြာပြီ မိသားစုမှာတော့ ပင်တိုင်ရေးပေးနေသူတွေ ရှိတယ် - ဝင်ကြည့်လို့ ကိုဂူတို့ဆီ လမ်းညွှန်လိုက်တယ်။" ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မစမ်းသပ်နိုင် မမျှဝေနိုင်တော့ပေမယ့် မိသားစုမှာ ရေးထားတဲ့ Linux နဲ့ ဆိုင်တဲ့ စာလေးတွေ ပုံလေးတွေ ကြည့်ရင်း Ubuntu ကို လွမ်းခဲ့ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။
Life is what you make of it. Go out and make your dreams come true.
အောက်ပါအသင်းဝင် 14 ဦးတို့မှ KznT အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလင်း1z, နီထွန်းဦး, မျိုးဟန်ထက်, သန့်ဇင်ဌေး, အောင်စိုးကြည်, amaung344, bagothar85, g00gle, iPod, kyawminkhoung, mmkyioo, thureinsoe, tu tu, zo
Find More Posts by KznT
24-10-2011, 01:49 AM
Ubuntu မှာ ဘာဆော့လ်ဝဲတွေ ပါသလဲ။ Windows မှာရှိတဲ့ Windows Media Player တို့၊ Microsoft Office တို့တော့ Ubuntu မှာ မပါလာပါဘူး။ WMP, Microsoft Office တို့နဲ့ ဆင်တူတဲ့ Softwares တွေတော့ ပါလာပါတယ်။
ဘာတွေလဲ။ ဘယ်လိုသုံးရမှာလဲ။ သုံးပုံသုံးနည်းက Windows မှာ ရှိတဲ့ software နဲ့ တူတူပါပဲ။ software နာမည်ကွာသွားတယ်။ Windows မှာ software သုံးတဲ့အခါ များသောအားဖြင့် Desktop မှာရှိတဲ့ Shortcut သို့မဟုတ် Start >> Programs ကနေ တဆင့်သွားရပါတယ်။ တချို့တွေကျတော့လဲ Mac လိုမျိုး သုံးရလွယ်ကူအောင် Rocket Dock, Launchy, Object Dock လိုမျိုး Launcher တွေ သုံးကြတယ်။ Ubuntu မှာလဲ Mac လိုမျိုးပဲ Install လုပ်ကတည်းက Launcher ပါပါတယ်။ Launcher ကနေ software ကို သုံးနိုင်သလို၊ Dash Home >> Software နာမည် ရိုက်ထည့်ပြီးလဲ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Software ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
Launcher ဆိုတာက Screen ရဲ့ ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ ရှိတဲ့ Icons တွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ အတန်းပါ။ Ubuntu စ Installed လုပ်ပြီးရင် အသုံးများတဲ့ softwares တွေဖြစ်တဲ့ Firefox, LibreOffice Writer, LibreOffice Calc, LibreOffice Impress ဆိုပြီး တွေ့ရပါမယ်။ Launcher မှာရှိတဲ့ Icon ပေါ် Click တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ software ကို သုံးလို့ရပါတယ်။
Windows7မှာ Internet သုံးဖို့ Internet Explorer 8 ပါသလို၊ Ubuntu မှာ Firefox7ပါလာပါတယ်။ Windows မှာ စာစီစာရိုက်လုပ်ဖို့ Microsoft Office ကိုဝယ်ပြီး Install လုပ်ပေးရပါတယ်။ ဝယ်ဖို့ မတတ်နိုင်တဲ့သူတွေကတော့ လိုင်စင်မဲ့ download လုပ်ရတာပေါ့။ Ubuntu မှာတော့ Microsoft Office အစားထိုး LibreOffice ဆိုတဲ့ software ပါပါတယ်။ ဝယ်ဖို့လဲ မလို၊ လိုင်စင်မဲ့သုံးဖို့လဲ မလို၊ သီးသန့် Install လုပ်ပေးနေဖို့လဲ မလိုပါ။ Microsoft Word အစား LibreOffice Writer ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ Excel အစား LibreOffice Calc, Powerpoint အစား LibreOffice Impress ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
PDF တွေ ဖတ်ချင်တယ်။ Adobe Reader လိုသလား။ မလိုပါဘူး။ Ubuntu မှာ PDF တွေဖတ်ဖို့ Evince Document Viewer ပါပြီးသားပါ။ ဒါကြောင့် PDF ဖတ်ဖို့ Windows မှာလို သီးသန့် software သွင်းဖို့ မလိုပါဘူး။ PDF files တွေကို ဘာ softwares မှ သီးသန့် မသုံးပဲ Preview ကြည့်နိုင်၊ ဖတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံအတွက် Ubuntu မှာ Shotwell Photo Manager ပါပါတယ်။ သာမန် ဓာတ်ပုံကြည့်ဖို့ သုံးနိုင်တဲ့အပြင် ဓာတ်ပုံတွေကို စနစ်တကျ သိမ်းထားချင်တဲ့သူတွေ အတွက်လဲ အသုံးဝင်ပါတယ်။ Picasa ကဲ့သို့ပဲ ဓာတ်ပုံတွေ Import လုပ်နိုင်၊ Import လုပ်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို Date အလိုက် အမျိုးအစားခွဲတာ သို့မဟုတ် Tags တွေ တပ်ပြီး စနစ်ကျအောင် သိမ်းထားလို့ ရပါတယ်။
Crop လုပ်တာ၊ Red-eye ပြင်တာ၊ ပုံကို Enhance လုပ်တာ၊ Exposure, Saturation တွေ ပြင်တာ စတဲ့ အခြေခံ Photo Editing တွေကို Shotwell Photo Manager နဲ့ လုပ်လို့ ရပါတယ်။ Windows မှာလို ဓာတ်ပုံကို Black & White ပြောင်းဖို့၊ သို့မဟုတ် Hue, Saturation တွေနဲ့ Color စုံလုပ်ဖို့ Photoshop မလိုပါဘူး။ Shotwell Photo Manager ရဲ့ Adjust Tool ကနေ အလွယ်တကူ ပြင်လို့ ရပါတယ်။ Shotwell ကို အသုံးပြုဖို့အတွက် Dash Home button ကို နှိပ်၊ View Photos ဆိုတာကို နှိပ်ပေးရုံပါပဲ။ ဒါမှမဟုတ် Dash Home button ကို နှိပ်ပြီး shotwell လို့ရိုက်ထဲ့၊ Shotwell Photo Manager ကိုဖွင့်လို့လည်း ရပါတယ်။
Last edited by g00gle; 24-10-2011 at 01:57 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 13 ဦးတို့မှ g00gle အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မျိုးဟန်ထက်, သန့်ဇင်ဌေး, amaung344, asulike88, bagothar85, Bayint Naung, iPod, kyawminkhoung, mmkyioo, phoelapyaee, thureinsoe, tu tu, zo
24-10-2011, 08:34 AM
Ubuntu မှာ သီချင်းနားထောင်ဖို့ အတွက် Windows Media Player လိုမျိုး သုံးနိုင်တဲ့ Banshee Player ပါလာပါတယ်။ Banshee Player ကို ဖွင့်ဖို့ Dash Home >> Banshee နှိပ်ပြီး Banshee Player ကို ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
အရင်ဆုံး သီချင်းစ နားမထောင်ခင် အောက်က အဆင့်လေးတွေ လုပ်စေချင်ပါတယ်။ Banshee ကို ဖွင့်ပြီးရင် Menu bar ကို သွားပြီး Media >> Import Media ကို နှိပ်ပါ။
Import from Folders ကို ရွေးပြီး Choose Folders ကို နှိပ်ပါ။ သီချင်းရှိတဲ့ Folder တစ်ခုကို ရွေးပေးပါ။ Banshee Libraries ထဲကို သီချင်းတွေ ထည့်ပေးသွားပါမယ်။
သီချင်းတွေကို Play လုပ်ပေမဲ့ MP3 ဆိုရင် ဖွင့်လို့မရတာ တွေ့ရပါမယ်။ Internet ချိတ်ထားရင် Search for suitable plugins ဆိုပြီး တွေ့ရပါမယ်။ MP3 ဖွင့်မရတာက Ubuntu က အသုံးမကျလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ MP3 format က Patent Law, Copyright Laws တွေနဲ့ ညှိနေတဲ့အတွက် Ubuntu လို Free Operating system မှာ သုံးချင်တိုင်း သုံးလို့မရတာပါ။ ဒါဆို Banshee က MP3 ဖွင့်လို့မရရင် ဘာတွေ ဖွင့်လို့ရသလဲ။ Free Audio format ဖြစ်တဲ့ Ogg format တွေဖွင့်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Ogg format ဆိုတာက သိပ်မသုံးကြတော့ MP3 ကို ဖွင့်လို့ရအောင် Restricted Plugins တွေ သွင်းဖို့လိုပါတယ်။ Internet ရှိရင် Search ကို နှိပ်လိုက်ရင် လိုအပ်တဲ့ Plugins ကို အလိုလို ရှာပေးပါမယ်။ ရှာလို့တွေ့ရင် Install လုပ်ပေးရုံပါပဲ။
Update မလုပ်ထားတာ၊ သို့မဟုတ် Internet မရှိတာဆိုရင်တော့ လိုအပ်တဲ့ Plugins ကို Windows လိုမျိုးပဲ Files သီးသန့် ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး Install လုပ်ပေးရပါမယ်။ liboil0.3 ဆိုတဲ့ ဖိုင်နဲ့၊ Fluendo mp3 decoder GStreamer plugin ဆိုတဲ့ ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး Install လုပ်ရပါမယ်။ ကျွန်တော်ပေးတဲ့ Links တွေကသွားရင် Download *** ဆိုတဲ့အောက်က i386 သို့မဟုတ် amd64 ကို နှိပ်ပေးပါ။ တကယ်လို့ ကိုယ့်စက်က 32 bit ဆို i386 ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပေးပါ။ 64 bit ဆိုရင်တော့ amd 64 ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။ 32 bit, 64 bit မှန်း မသိရင်တော့ ပို့စ်နံပတ် ၁၆ ကို ဖတ်ပါ။
ဒေါင်းလုပ်လုပ်လို့ရလာတဲ့ liboil0.3_0.3.17-2ubuntu1_i386.deb ဖိုင်ကို အရင်ဆုံး Install လုပ်ပေးရပါမယ်။ ဖိုင်ကို Right Click >> Open with software center ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
Ubuntu Software Center ဆိုပြီး ပွင့်လာပါမယ်။ ပြီးရင် ကွန်ပျူတာ ဟန်းသွားသလိုမျိုး ခဏဖြစ်ပါမယ်။ ခဏစောင့်ပေးပါ။ ဘာမှမလုပ်ပဲ ဒီလိုမျိုး တွေ့ရတဲ့အထိ ခဏစောင့်လိုက်ပါ။ စာတွေ၊ ပုံတွေ သေချာတွေ့ရပြီဆိုမှ Install ကို နှိပ်ပါ။ တကယ်လို့ Dependency not satisfiable ဆိုရင်တော့ Install လုပ်လို့ ရဦးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Install ဆိုတာကို နှိပ်ပြီးရင် ခဏစောင့်ပါ။ အောက်က ပုံလို ဘယ်ဖက်မှာ Installed၊ ညာဖက်မှာ Reinstall ဆိုတာတွေ့ရပြီ ဆိုရင် Software Center ကို ပိတ်လို့ရပါပြီ။ ပြီးရင် gstreamer0.10-fluendo-mp3_0.10.15.debian-1_i386.deb ဖိုင်ကိုလဲ ဒီအတိုင်းပဲ Install လုပ်ပေးပါ။
အားလုံးပြီး သွားရင် Banshee Player ကို ဖွင့်ပြီး MP3 တွေ ဖွင့်ကြည့်ပါ။ MP3 တွေကို ဖွင့်လို့ ရသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Update: တခါတလေ Software Center ကနေ Offline Install လုပ်လို့ မရတာတွေ့ရပါတယ်။ Internet ချိတ်မှ Install လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒါဆို deb file တွေကို Software Center ကနေ မသွင်းပဲ၊ Terminal နဲ့ သွင်းရပါမယ်။ Terminal ဆိုလို့ လန့်မသွားပါနဲ့ အရမ်းမခက်ပါဘူး။
ပထမဆုံး liboil0.3_0.3.17-2ubuntu1_i386.deb နဲ့ gstreamer0.10-fluendo-mp3_0.10.15.debian-1_i386.deb ကို Downloads ဖိုဒါထဲကို ရွှေ့ထားပါ။ Dash Home >> Terminal လို့ ရိုက်ပြီး Terminal ကို ၀င်ပါ။
cd ~/Downloads လို့ ရိုက်ထဲ့ပါ။ (ဒီလိုမြင်ရပါမယ်။ - ကိုယ့်နာမည်@ubuntu:~$ cd ~/Downloads) Enter ခေါက်ပါ။
sudo dpkg -i liboil0.3_0.3.17-2ubuntu1_i386.deb လို့ ရိုက်ပါ။ (ဒီလိုမြင်ရပါမယ်။ - ကိုယ့်နာမည်@ubuntu:~/Downloads$ sudo dpkg -i liboil0.3_0.3.17-2ubuntu1_i386.deb နောက်ဆုံးက ဖိုင်နာမည်က ကိုယ်ဒေါင်းလုပ်ချထားတဲ့ Deb file နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ 64 bit အတွက်ဆို amd64 ဆိုပြီး နာမည်တစ်မျိုးဖြစ်ပါမယ်။) Enter ခေါက်ပါ။
Password ကို ရိုက်ပါ။ စာလုံးမြင်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မှိတ်တုတ်၊ မှိတ်တုတ်ဖြစ်နေတာပဲ တွေ့ရမှာပါ။ Enter ခေါက်ပါ။
Password ရိုက်ပြီးရင် Install လုပ်နေပါပြီ။
ကိုယ့်နာမည်@ubuntu:~/Downloads$ ဆိုပြီး တွေ့ရရင် နောက်ဖိုင်တခု Install လုပ်ပါမယ်။ ပထမအတိုင်းပဲ
sudo dpkg -i gstreamer0.10-fluendo-mp3_0.10.15.debian-1_i386.deb ဆိုပြီးရိုက်ပါ။ Enter နှိပ်ပါ။ ဖိုင်ကို Install လုပ်ပြီးသွားရင် exit လို့ ရိုက်ပြီး Terminal ကထွက်လိုက်ပါ။ ဒါဆို Install လုပ်ပြီးသွားပါပြီ။
Last edited by g00gle; 26-10-2011 at 02:41 AM..
နီထွန်းဦး, မျိုးဟန်ထက်, သန့်ဇင်ဌေး, bagothar85, iPod, kyawminkhoung, lu soe, mmkyioo, phoelapyaee, thureinsoe, tu tu, zo
24-10-2011, 08:58 AM
VLC Player သွင်းလိုက်ရင် MP3 တွေလဲ ဖွင့်လို့ရပါတယ်။ ဘာလို့ အပင်ပန်းခံပြီး Restricted Plugins တွေ သွင်းရလဲဆိုတော့ Banshee Player က Ubuntu မှာ သုံးဖို့ သင့်တော်လို့ပါ။ ဘာတွေလဲ ကြည့်ရအောင်။
Dash Home >> Listen to Music နှိပ်ပြီး Banshee Player ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ သီချင်းကို ဖွင့်လိုက်ပြီး Banshee Player ကို ပိတ်လိုက်ပါ။ သီချင်းသံက မပျောက်သွားတာ တွေ့ရပါမယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ Banshee Player က Ubuntu System နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားလို့ပါ။ ညာဘက် Screen ထောင့်က Volume အတိုး၊ အကျယ်ချိန်တဲ့ Icon လေးကို နှိပ်ကြည့်လိုက်ရင် Banshee - သီချင်းနာမည်၊ အဆိုတော် နာမည်၊ Play, Next, Previous buttons လေးတွေ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ Windows Media Player လို Task bar မှာ Minimize လုပ်ထားဖို့မလိုပါဘူး။ Ubuntu မှာ Banshee ကို ပေါင်းထဲ့ပေးထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ Banshee Player က အမြင်ရှုပ်လို့ ပိတ်ထားချင်ရင်လဲ ပိတ်ထားလို့ ရပါတယ်။
အဲဒီမှာပဲ ကြည့်လိုက်ရင် Choose Playlist ဆိုတာ တွေ့မှာပါ။ Playlist တွေ ဖန်တီးထားရင် Volume Icon လေးကနေ အလွယ်တကူ သီချင်း ပြောင်းကြည့်လို့ရပါတယ်။ Playlist လုပ်ဖို့အတွက် Banshee Player ကို ဖွင့်ပေးပါ။ Banshee ဆိုတဲ့ စာသားလေးကို နှိပ်လိုက်ရင် Banshee Player ပွင့်လာပါမယ်။ Menu bar က Media >> New Playlist ကို နှိပ်ပါ။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ နာမည်ပေးပါ။
ပြီးရင် ကိုယ်ပထမက Import လုပ်ထားတဲ့ သီချင်းတွေထဲက ကြိုက်တာကို select လုပ်၊ right click >> add to playlist >> ကိုယ့် playlist ကို ရွေးပေးရုံပါ။ ဒါဆို volume icon ကနေ အလွယ်တကူ သီချင်းတွေ ပြောင်းနားထောင်နိုင်ပါမယ်။
ရှုပ်နေတာပဲ။ Ubuntu က Windows မှာလို Folders ထဲက သီချင်းတွေ Select လုပ်ပြီး Enter ခေါက် Play လုပ်လို့မရဘူးလား။ ရပါတယ်။ Folder ထဲမှာ ရှိတဲ့ သီချင်းတွေကို Select လုပ်၊ Enter ခေါက်တာ ဖြစ်ဖြစ်၊ right click >> Open with Banshee Media Player ဆိုလဲ ဖွင့်လို့ ရပါတယ်။
ဒါဆို ဘာလို့ ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက် Import Media, Playlists တွေ ပြောနေရတာလဲ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဒီတိုင်း Folder ကနေ သီချင်းတွေ ဖွင့်လိုက်ရင် File System Queue ဆိုတဲ့အောက်ကို ရောက်သွားပါတယ်။ Ubuntu ကို Restart လုပ်လိုက်တဲ့အခါ ဖြစ်ဖြစ်၊ shutdown လုပ်တဲ့အခါ ဖြစ်ဖြစ် file system queue ထဲက List က ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။ Libraries ထဲ Import လုပ်ထားတဲ့ သီချင်းတွေကတော့ နောင် Restart လုပ်ပြီးလဲ ကျန်နေမှာပါ။ သိပ်တော့ မသိသာလှပေမဲ့ Libraries ထဲ Import လုပ်ထားတာ၊ Playlist တွေ လုပ်ထားတာက သီချင်းဖွင့်ရတာ မြန်ဆန်စေပါတယ်။
Banshee မှာ Album က သီချင်းတွေ ကုန်ရင် အစကနေ ဘယ်လို Replay လုပ်မလဲ။ Menu Bar >> Playback >> Repeat >> Repeat All/Single လုပ်လိုက်ရင် Replay ပြန်လုပ်လို့ ရပါတယ်။
Shuffle ကော လုပ်လို့ရလား။ Next button ဘေးက မြှားလေးကို နှိပ်လိုက်ရင် သီချင်းအလိုက်၊ အဆိုတော် အလိုက်၊ Album အလိုက် အမျိုးမျိုး Shuffle လုပ်လို့ ရပါတယ်။
Windows Media Player လိုပဲ သီချင်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ information တွေ၊ Album Art တွေ ထည့်တာ လုပ်လို့ ရပါတယ်။ သီချင်းကို Right click >> Edit Track information ကို နှိပ်ပါ။ Track Editor ဆိုပြီး တွေ့ရပါမယ်။ Album Art ပြင်တာ၊ အဆိုတော် နာမည်၊ album နာမည်ထည့်တာ၊ ရက်စွဲ၊ သီချင်းအမျိုးအစားထည့်တာတွေ လုပ်လို့ရပါတယ်။
Internet ရှိမယ်ဆိုရင် Banshee Player ကို သုံးပြီး Online က Podcasts, Radio တွေ URL သိရင် Banshee မှာ URL ထည့်ပြီး နားထောင်နိုင်ပါတယ်။ အလွယ်တကူအနေနဲ့ Internet Archive ကနေ Audio Books, Videos တွေ အခမဲ့ နားထောင်နိုင်၊ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ပုံထဲမှာက Internet Archive က Sherlock Holmes Audiobook ပါ။
ဒါ့အပြင် Itunes ကဲ့သို့ပဲ Ubuntu One Online Store ကနေ သီချင်းတွင် ၀ယ်နိုင်၊ အမြည်းနားထောင်နိုင်တာ လုပ်လို့လဲ ရပါတယ်။ တခါတလေ Free download လေးတွေလဲ ရှိပါတယ်။ Dash Home >> Music Lens ကနေ သီချင်းတွေ ရှာလိုက်ပြီး ဖွင့်လိုက်ရင် Banshee Player နဲ့ Ubuntu One Store မှာ သီချင်း လာပွင့်ပါတယ်။ Amazon MP3 Store ကနေလဲ သီချင်းတွေ ၀ယ်နိုင်ပါသေးတယ်။ Last FM က Free သီချင်းတွေ၊ Radio၊ Miro Guide က Audio, Videos တွေ ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Banshee နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဒီလောက်ပါပဲ။
Last edited by g00gle; 24-10-2011 at 11:47 AM..
နီထွန်းဦး, မျိုးဟန်ထက်, သန့်ဇင်ဌေး, bagothar85, iPod, kyawminkhoung, lu soe, mmkyioo, nightman, ORange & ROse, phoelapyaee, tu tu, zo
24-10-2011, 06:49 PM
ကိုဂူရေ ကောင်းတယ်ဗျ....ဖိုရမ်ဝင်တိုင်း ဒီသရက်လေးမှာ ဘာတွေများ အသစ်ဆန်းလေးတွေ ပါမလဲလို လာလာကြည့်မိတာတော့ အမောပဲ့ အားပေးနေမယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း သုံးနေပေ့မယ် အားလပ်ချိ်န်မရသေးလို့ သေချာ မလုပ်နိုင်သေးဘူး စာလေးတွေပဲ့ လာလာဖတ်နေဖြစ်တယ် ။အားပေးတယ် အကိုရေ... များများရေးပါ။... ပင်တိုင် ဖတ်မဲ့ ကျွန်တော် ရှိတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ သန့်ဇင်ဌေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နီထွန်းဦး, မျိုးဟန်ထက်, g00gle, kyawminkhoung, lu soe, tu tu, zo
26-10-2011, 12:46 AM
MP3 တွေ ဖွင့်ဖို့အတွက်တော့ ရပါပြီ။ Videos တွေကော ဘယ်လို ဖွင့်မလဲ။ Ubuntu မှာ Video Player အနေနဲ့ Totem Movie Player ပါလာပါတယ်။ Dash Home >> Movie Player လို့ရိုက်ပြီး Movie Player ကို Click လုပ်ပါ။ သူက Banshee လိုပဲ၊ Free format ဖြစ်တဲ့ oog (ogv) format ပဲ ဖွင့်လို့ရပါတယ်။ AVI, MOV, MPEG, FLV, 3gp စတာတွေ ဖွင့်ဖို့ဆိုရင် Restricted Plugins လိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ပြောရရင် Totem Movie Player က အရမ်းမကောင်းဖူးလို့ ထင်တယ်။ သူ့ထက်စာရင် VLC Media Player ကပိုကောင်းတယ် ထင်တယ်။ Restricted Plugins သွင်းပြီး အလုပ်ရှုပ်ခံမဲ့အစား VLC ကို သွင်းလိုက်ရင်ပဲ မကောင်းဖူးလားပေါ့။
Internet ရှိတဲ့သူအတွက် VLC သွင်းဖို့ လွယ်ကူပါတယ်။ ကျွန်တော် Post No.4အတိုင်း Software Sources မှာ Universe, Multiverse ကို အမှန်ခြစ်ထားမယ်။ နောက် တခြားဟာတွေလဲ ပြင်ထားမယ်။ Update လဲ လုပ်ထားမယ်ဆိုရင် Software Center က အလွယ်တကူ VLC ကို သွင်းနိုင်ပါတယ်။
Software Center ဆိုတာ ဘာလဲ။ Ubuntu မှာ softwares သွင်းရာမှာ Windows မှာလို Google မှာ ရှာ၊ ဟို Software download လုပ်ပြီး double-click install လုပ်မဟုတ်ပါဘူး။ Ubuntu အတွက် အသုံးများတဲ့ softwares တွေကို Software Sources တွေမှာ သိမ်းထား၊ Software center နဲ့ ရှာ၊ Install ခလုပ်တချက်နှိပ်ပြီး သူ့အလိုလို download လုပ်၊ Install လုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Windows မှာ တွေ့ရတဲ့ exe file မျိုးက Ubuntu မှာ သိပ်မတွေ့ပါဘူး။ EXE file လိုမျိုး မရှိဖူးလားဆိုတော့ ရှိပါတယ်။ အထက်က ပို့စ်တွေမှာ Install လုပ်ခဲ့တဲ့ DEB file တွေက EXE file နဲ့ ဆင်ပါတယ်။
Software Center ကနေ ဘယ်လို download လုပ်မလဲ။ုDash Home >> Software Center လို့ရိုက်ပြီး ၀င်လိုက်ပါ။ ညာဘက်က Search box မှာ vlc လို့ ရိုက်လိုက်ပါ။ VLC media player ဆိုပြီးတွေ့ရပါမယ်။ Install ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ရင် သူ့အလိုလို download လုပ်၊ install လုပ်သွားပါမယ်။ ကိုယ်က Install ပြီးတဲ့အထိ ကော်ဖီသောက်ပြီး နှပ်နေရုံပါပဲ။ Windows မှာလို Google မှာ ရှာ၊ ကိုယ်တိုင် ဒေါင်းလုပ်လုပ်၊ Install လုပ်ဖို့ Click အများကြီး နှိပ်ဖို့မလိုပါဘူး။
Internet မရှိရင်ကော ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ Internet မရှိရင် သုံးရ နည်းနည်းခက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Internet မရှိတိုင်း Software သွင်းလို့မရာတာလား ဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ packages.ubuntu.com ကနေ လိုအပ်တဲ့ ဖိုင်တွေ ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မကောင်းတာက Ubuntu မှာ software သွင်းတဲ့အခါ software တစ်ခုလုံးကို သွင်းလိုက်တာ မဟုတ်ပဲ၊ software ရဲ့ အပိုင်းအပိုင်းလေးတွေကို စုပြီး သွင်းလိုက်တာပါ။ အဲဒီအပိုင်းလေးတွေကို dependency files တွေလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ Internet ရှိရင် လိုအပ်တဲ့ Dependency files ကို Ubuntu က အလိုလိုရှာ ဒေါင်းလုပ်လုပ်၊ Install လုပ်ပေးပါတယ်။ Internet မရှိရင် Dependencies files တွေကို packages.ubuntu.com ကနေ manually ရှာဖို့က မဖြစ်နိုင်တဲ့ အလုပ်ပါ။
ဒါဆို Ubuntu မှာ Video မကြည့်ရတော့ဖူးပေါ့။ မဟုတ်ပါ။ ရပါတယ်။ Portablelinuxapps.org ကထုတ်တဲ့ Portable VLC ကို သုံးပြီး ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ VLC 1.1.1 ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး ပုံမှန် VLC အတိုင်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Video, Audio formats အများကြီးကို VLC က ဘာ Restricted Plugins မှ သွင်းနေစရာမလိုပဲ ဖွင့်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့ ဖိုင်ကို Right Click >> Properties >> Permissions >> Allow executing file as program ကို အမှန်ခြစ်ပေးပြီးရင် Double-click နဲ့ ဖွင့်လို့ရပါပြီ။
ဟာ Portable Apps မသုံးချင်ပါဘူး။ Install ပဲ လုပ်ချင်တယ်။ လုပ်လို့တော့ ရပါတယ်။ နည်းနည်းတော့ ရှုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ပထမဆုံး packages.ubuntu.com ကနေ synaptic နဲ့ libept1 ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရပါမယ်။ အရင် Post မှာ ပြောထားတဲ့ အတိုင်း 32 bit ဆို i386, 64 bit ဆို amd64 ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရပါမယ်။ ဒေါင်းလုပ်ပြီးရင် Downloads ဖိုဒါထဲ ကူးထဲ့လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Dash Home >> Terminal လို့ရိုက်ပြီး Terminal ကို ဖွင့်ပါ။
Terminal မှာ ***@ubuntu: ~$ ဆိုပြီး တွေ့ပါမယ်။ အောက်ကအတိုင်း ရိုက်ထဲ့ပါ။
cd ~/Downloads ဒီ - D ကို စာလုံးအကြီးနဲ့ ရိုက်ထည့်ရပါမယ်။ Enter နှိပ်ပါ။ ***@ubuntu: ~/Downloads $ ဆိုပြီး ပြောင်းသွားပါမယ်။ ပြီးရင်
sudo dpkg -i synaptic_0.75.2ubuntu8_i386.deb libept1_1.0.5build1_i386.deb လို့ ရိုက်ထဲ့ပါ။ Enter နှိပ်ပါ။ (sudo dpkg -i ဆိုတာက DEB file တွေကို Terminal က သွင်းဖို့ သုံးတဲ့ Command ပါ။ -i နောက်မှာ Space ခံ၊ DEB file နာမည်ကို ရိုက်ထဲ့၊ နောက်ဖိုင်တစ်ခုကိုလဲ Space ခံ ရိုက်ထည့်ရုံပါ။ DEB file အများကြီးကို Terminal ကနေ ဒီတိုင်း Install လုပ်လို့ရပါတယ်။) amd64 ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားရင် -i နောက်မှာ ရိုက်ရတဲ့ ဖိုင်နာမည်က ကိုယ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားတဲ့ ဖိုင်နာမည်အတိုင်း ရိုက်ထဲ့ဖို့လိုပါတယ်။
Password တောင်းရင် Password ရိုက်ထဲ့ပြီး Enter နှိပ်ပါ။ ဘာစာလုံးမှ တွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။
အခု Install လုပ်လိုက်တဲ့ ဖိုင်နှစ်ခုက Synaptic Package Manger ကိုသွင်းဖို့ လိုအပ်တဲ့ ဖိုင် ၂ ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Synaptic Package Manage ဆိုတာက software center လိုပဲ software သွင်းဖို့ လုပ်ထားတဲ့ application တစ်ခုပါပဲ။
VLC ကို သွင်းဖို့ လိုအပ်တဲ့ ဖိုင်တွေကို Mediafire ကနေ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။ ကျွန်တော် Script သုံးပြီး i386 အတွက် ဖိုင်တွေ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်မှ amd64 အတွက် တင်ပေးပါမယ်။ zip ဖိုင်နဲ့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Zip ဖိုင်ကို Right click >> Extract Here လို့ လုပ်လိုက်ပါ။ vlc ဆိုတဲ့ ဖိုဒါတစ်ခုနဲ့ ဖိုင်တွေ ထွက်လာပါမယ်။ (Ubuntu မှာ Zip file ကို ဖြေဖို့ Archive Manager ပါပြီးသားပါ)
နောက် Dash Home >> Synaptic Package Manager ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ File >> Add downloaded packages ကို ရွေးပါ။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားတဲ့ vlc ဖိုဒါ ကို ရွေးပေးပြီး Open လုပ်လိုက်ပါ။
Apply the following changes ဆိုပြီး တွေ့ရပါမယ်။ တကယ်လို့ 45 new packages will be installed ဆိုတာကို တွေ့ရင် Apply လုပ်လိုက်ပါ။ VLC ကို Install လုပ်ပါမယ်။ 45 မဟုတ်ပဲ တခြား နံပါတ်တခုဆို Cancel လုပ်ပါ။
45 packages မဟုတ်ခဲ့ရင်တော့ Terminal ကနေပဲ Install လုပ်ရပါမယ်။ post 26 ကို ဖတ်ပေးပါ။
Last edited by g00gle; 24-11-2011 at 12:14 PM..
နီထွန်းဦး, မျိုးဟန်ထက်, သန့်ဇင်ဌေး, ကောင်ပေါက်စ, အောင်လံလေး, bagothar85, iPod, lu soe, mmkyioo, ORange & ROse, phoelapyaee, zo
26-10-2011, 12:51 AM
ပို့စ် 74 ခုအတွက် 179 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Ubuntu 11.10 ကို 32 bits နဲ့ 64 bits ဘယ်ဟာတင်သင့်လဲ ပြောပြပေးပါလား
Window7မှာတော့ 32 bits ကိုပဲ များသောအားဖြင့်တင်ကြလို့ပါ
[SIZE="5"][COLOR="DeepSkyBlue"]မျှော်လင့်ချစ်နဲ့ ချစ်နိုင်ပါတယ် စွန့်လွှတ်ချစ်နဲ့တော့ မချစ်နိုင်ပါ[/COLOR][/SIZE]
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ ကောင်ပေါက်စ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နီထွန်းဦး, မျိုးဟန်ထက်, g00gle, lu soe, zo
Find More Posts by ကောင်ပေါက်စ
26-10-2011, 01:29 AM
Originally Posted by ကောင်ပေါက်စ
အကို့ ကျွန်ပျူတာက 32 bit လား၊ 64 bit လား၊ 32 bit ဆိုရင်တော့ 32 bit တင်ပါ။ 64 bit ဆိုရင် 64 bit ကို တင်ပါ။ Packages install လုပ်တဲ့အခါ 32 bit က packages ကိုတော့ 64 bit မှာ တင်လို့ ရတယ် ပြောပါတယ်။ 64 bit က Packages ကိုတော့ 32 bit မှာ Install လုပ်လို့မရပါဘူး။ စမ်းတော့ မစမ်းဖူးပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ g00gle အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နီထွန်းဦး, မျိုးဟန်ထက်, သန့်ဇင်ဌေး, ကောင်ပေါက်စ, bagothar85, lu soe, zo
26-10-2011, 02:04 AM
ကျွန်တော် အထက်မှာ VLC အတွက် လိုအပ်တဲ့ dependency files တွေကို Script သုံးပြီး ဒေါင်းလုပ်လုပ်တယ် ပြောခဲ့ပါတယ်။ packages.ubuntu.com ကနေ manually ဒေါင်းလုပ်လုပ်တာလား။ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ် Dependency ဖိုင်မှန်း မသိတာရယ်၊ ဖိုင်အများကြီး ရှာလိုက် ဒေါင်းလုပ်လုပ်လိုက် လုပ်ရမှာမို့ အဲဒီနည်းကို မသုံးပါဘူး။ Script သုံးပါတယ်။ ဒါဆို Script ဘယ်လို လုပ်မလဲ။ Internet နဲ့ Synaptic Package Manager ရှိဖို့ လိုပါမယ်။ လိုအပ်တဲ့ Software Sources ကို Update လုပ်ထားပေးဖို့ လိုပါမယ်။
Dash Home >> Synaptic Package Manger ကို ဖွင့်ပါ။ Install လုပ်ချင်တဲ့ ဆော့လ်ဝဲတစ်ခုကို Click လုပ်ပြီး Mark for installation ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
Marked additional required changes လုပ်မလားဆိုပြီး မေးပါမယ်။ ကိုယ်သွင်းချင်တဲ့ software အတွက် လိုအပ်တဲ့ dependency files တွေပါ။ Mark လုပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် File >> Generate Package download script ဆိုတာကို နှိပ်ပါ။
Save လုပ်ချင်တဲ့ နေရာရွေး၊ နာမည်ပေးပြီး၊ Save ကို နှိပ်ပါ။
ဒါဆို Script ရပါပြီ။ Script ကို folder အလွတ်တစ်ခုထဲထည့်ပါ။ Right Click >> Properties >> Permissions >> Allow executing files as program ကို အမှန်ခြစ်ပေးပါ။ ဒါဆို Script ကို Right Click >> Open လုပ်လိုက်ရင် ဒီလိုမျိုး Do you want to run or display contents? ဆိုပြီး တွေ့ပါမယ်။ Run in terminal ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ လိုအပ်တဲ့ ဖိုင်တွေကို အဲဒီ Folder ထဲ ဒေါင်းလုပ်လုပ်နေပါမယ်။ Install လုပ်နည်းကတော့ အထက်က ပို့စ်အတိုင်းပါပဲ။
နောက်ထပ် Offline packages ယူနည်းအနေနဲ့ ကိုပဲခူးသားက Customized Linux Live CD/USB ဆိုပြီး ရေးထားပေးပါသေးတယ်။ နောက် Ubuntu 11.10 ရဲ့ Software Center မှာ OneConfig ဆိုတာပါပါတယ်။ ကျွန်ပျူတာမှာ ရှိတဲ့ softwares တွေကို တခြား computers တွေနဲ့ sync လုပ်တာပါ။ နောက် AptonCD ဆိုတဲ့ Software ရှိပါတယ်။ software center က ရှာပြီး သွင်းနိုင်ပါတယ်။ Internet မရှိရင် Script နဲ့ Offline Packages download လုပ်ပြီး AptonCD ကို အရင်သွင်းဖို့တော့ လိုပါမယ်။
Script ပြုလုပ်ပုံကို tuxgarage.com ရဲ့ ဒီ Post ကို ကူးယူပြီး ရေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Last edited by g00gle; 04-11-2011 at 09:35 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ g00gle အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
သန့်ဇင်ဌေး, ကောင်ပေါက်စ, bagothar85, htinlinn, iPod, mmkyioo, phoelapyaee, zo
Originally Posted by g00gle
အကို့ ကျွန်ပျူတာက 32 bit လား၊ 64 bit လား၊
ကျနော့ကွန်ပျူတာ 32 လား 64 လား ဆိုတာကို ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲခင်ဗျာ မသိလို့ပါ :fp:
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ကောင်ပေါက်စ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
g00gle, htinlinn, zo
26-10-2011, 02:32 AM
ဆောရီးပါ။ ပျင်းတာနဲ့ Link မထည့်ပေးလိုက်တာ။
သန့်ဇင်ဌေး, ကောင်ပေါက်စ, မောင်သံသရာ, bagothar85, iPod, lu soe, Zin Zin Win, zo
26-10-2011, 04:29 AM
Ubuntu မှာ Zip file တွေကို ဖြည်ဖို့အတွက် Archive Manager ဆိုတဲ့ software ပါလာပါတယ်။ Zip file အပြင်၊ Ubuntu မှာ သုံးတဲ့ Archive ဖိုင်အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ Tar ball ဖိုင်တွေကိုလဲ ဖြည်နိုင်ပါတယ်၊ Archive လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Right click >> Open with Archive Manger >> Extract လုပ်ရင် ရပါပြီ။ Rar format အမျိုးအစားကတော့ WinRar company က ထုတ်တဲ့ Format ဖြစ်ပြီး free format မဟုတ်တဲ့ အတွက် Ubuntu မှာ Archive Manager နဲ့ ဖြည်လို့မရပါဘူး။ Software ထပ်သွင်းမှ ဖြည်လို့ရမှာပါ။ Offline သုံးတဲ့သူရော၊ Online သုံးတဲ့သူ Bandwidth သက်သာအောင် Ubuntu တင်တိုင်း software သွင်းဖို့မလိုတဲ့ Portablelinuxapps.org ကနေ Portable Peazip ကို သုံးကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ စက်ထဲသွင်းချင်ရင် Peazip website ကနေ DEB file ကိုယူပြီး အရင်ပို့စ်တွေမှာ ပြထားသလို Install လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် Peazip website က Portable version ကိုလဲ ယူသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆို Zip, Rar, 7zip အကုန်လုံး ဖြည်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ File တွေ Split လုပ်တာ၊ Join လုပ်တာအတွက် HJSplit ဆိုတဲ့ Software ရှိပါတယ်။ သူလဲ Portable သုံးလို့ ရပါတယ်။
နောက် ထပ်မေးပါတယ်။ Ubuntu မှာ CD Burn လို့ ရသလား။ ရပါတယ်။ Windows မှာလိုပဲ Ubuntu တင်ကတည်းက CD Burn ဖို့ Software ပါပါတယ်။ Ubuntu မှာပါတဲ့ software ကို Brasero လို့ ခေါပါတယ်။ Dash Home >> Brasero ဆိုပြီး ၀င်လိုက်ပါ။ ၀င်လိုက်တာနဲ့ အလွယ်တကူ CD ကူးဖို့ နည်းတွေ့မှာပါ။ ISO, IMG file တွေကို Burn လုပ်ချင်ရင် Burn Image (Burn an existing CD/DVD image to disc) ကိုနှိပ်ပြီး လုပ်ရုံပါ။ Video Cd လုပ်ချင်ရင် Video Project ကနေလုပ်ပါ။ ဒါဆို DVD Player နဲ့ဖတ်လို့ရပါမယ်။ Audio CD ဆိုရင် Audio Project ကနေ ဆက်လုပ်ပါ။ Music Player နဲ့ ဖွင့်လို့ရပါမယ်။ ရိုးရိုး Data ကူးရုံပဲဆို Data Project နဲ့ သွားပါ။ CD Rom2ခု ရှိရင် Disc နှစ်ခုထည့်ပြီး Disc Copy ကနေ တစ်ခုကနေ တစ်ခုကို ကူးလို့လဲ ရပါတယ်။ ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ။ ဘာမှ မလိုဘူး။ ကိုယ်ဘာလုပ်ခဲ့လဲ မှတ်ထားချင်ရင် Project ကို Save လုပ်ထားပါ။ Menu bar ကို သွား >> Project >> New Project >> ... ဆိုပြီး လုပ်ရုံပါ။ ပြီးရင် Save လုပ်ရုံပဲ။
သီချင်းဆိုပြီး Record လုပ်ထားချင်တယ်။ ရပါတယ်။ Dash Home >> Sound Recorder နဲ့ဆို Record လုပ်ထားလို့ ရပါတယ်။
ဖိုင်တွေ Backup လုပ်ဖို့ကော၊ software ပါသလား။ ပါပါတယ်။ Dash Home >> backup ဆိုပြီး ၀င်လိုက်ရင် Deja Dup Backup software ကို သုံးလို့ရပါမယ်။ တော်တော်ကောင်းတဲ့ software ပါ။ အခု version မှာ update လုပ်ထားပေးတယ်။
ကျွန်တော်တခါက ထင်ခဲ့ဖူးတယ်။ Windows မှာပါတဲ့။ Solitaire တို့၊ Mines တို့ကို ဘယ်သူမှ မဆော့လောက်ပါဘူးပေါ့။ ကျွန်နော်ထင်တာ မှားပါတယ်။ အဲဒီ Games အသေးလေးတွေ ဆော့တဲ့သူလဲ ရှိပါတယ်။ Ubuntu မှာ Solitaire, Mines, Sudoku, Gbrainy, Mahjongg စတဲ့ Games တွေ Default ပါလာပါတယ်။ Dash Home >> ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Game နာမည် ရိုက်ထဲ့။ သို့မဟုတ် Dash Home >> Application lens (အောက်နားက Home Icon ဘေးက Icon လေးကို နှိပ်ပါ) >> Filters >> Games ဆိုပြီးလဲ သွားလို့ ရပါတယ်။
Screenshot အတွက်လဲ Windows Snipping Tool လိုမျိုး software တစ်ခုပါပြီးသားပါ။ Dash Home >> Screenshot သို့မဟုတ် Print Screen Button နှိပ်ပြီးလဲ ဆော့လ်ဝဲကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
Scanner အတွက်လဲ သီးခြား software install လုပ်ပေးနေဖို့ မလိုပါဘူး။ Simple Scan ဆိုတဲ့ Scanning Software ပါပြီးသားပါ။ လိုအပ်တဲ့ Scanner Driver ကို သက်ဆိုင်ရာ Website ကနေ ဒေါင်းလုပ်ချ သွင်းပြီးရင် Simple Scan software နဲ့ အလွယ်တကူ Scan ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Photoshop ကဲ့သို့ Image Editor အနေနဲ့ GIMP ဆိုတဲ့ Software ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဖိုင် Size အနည်းငယ်များတဲ့အတွက် Ubuntu မှာ Default အနေနဲ့ မပါလာပါဘူး။ အသုံးပြုချင်ရင် Software Center ကနေ GIMP Image Editor ကို သွင်းဖို့လိုပါတယ်။ Offline သွင်းဖို့အတွက်ကတော့ Download Script လုပ်ပေးဖို့ တစ်ယောက်ယောက်ကို အကူအညီတောင်းပါ။ Script ရရင် ကျွန်တော်ပေးတဲ့ လင့်က၀င်ကြည့်ရင် Windows က ဒေါင်းလုပ်လုပ်မဲ့ နည်းကိုပါ တွေ့မှာပါ။ CD မှာ ပါကောင်းပါလာ နိုင်ပါတယ်။ စမ်းကြည့်ပါ။ Partition ခွဲချင်တယ်ဆိုရင် Ubuntu CD/USB ကို အသုံးပြုပါ။ Install လုပ်ထားတဲ့ Ubuntu မှာ GParted Partition Manager လို့ခေါ်တဲ့ software မပါပါဘူး။ ပါရင်လဲ Hard Disk ကို အသုံးပြုနေတဲ့ အတွက် Partition ခွဲလို့ ရချင်မှ ရပါမယ်။ Live CD/USB ကနေ Boot တက်ပြီး Partition ခွဲရင်တော့ အလွယ်တကူ ရပါတယ်။ Windows ဆော့ဝဲတွေကို သုံးချင်ရင် Wine ဆိုတဲ့ Software သုံးဖို့လိုပါမယ်။ software center ကနေ အလွယ်တကူ Install လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ Ubuntu သုံးလာအောင် မြူဆွယ်တာ ဒီလောက်ပါပဲ။ Internet Applications တွေ ဖြစ်တဲ့ Firefox 7, Gtalk ကဲ့သို့ သုံးနိုင်တဲ့ Empathy Messenger, Facebook, Twitter တို့ကို Ubuntu Desktop ကနေ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုမဲ့ Gwibber Social Client, Torrent ဒေါင်းလုပ်လုပ်မဲ့ Transmission Torrent Software စတာတွေကိုတော့ ကျွန်တော် မရေးတော့ပါဘူး။ ရေးပေးချင်သူများ ဆက်လက်ရေးပေးနိုင်ပါတယ်။ Ubuntu မှာ ပါလာတဲ့ Unicode Burmese keyboard မဟုတ်ပဲ၊ တခြား Myansan Keyboard, Ayar Keyboard, Zawgyi Keyboard, Keymagic, Ibus စတာတွေကိုလဲ ချန်ထားပါတယ်။ ရေးပေးချင်သူများ ရေးပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အခြေခံ Ubuntu 11.10 ကို ဒီမှာပဲ နှုတ်ဆက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အထင် ပို့စ်တွေကို အစဉ်လိုက်ဖတ်သွားရင် Ubuntu သို့မဟုတ် Linux တစ်ခုခုကိုတော့ သာမန် User လောက် အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ ပိုအဆင့်မြင့်တဲ့ Customization တွေ၊ Tips & Tricks တွေကိုတော့ ဖိုရမ်၊ Blogs, Websites များမှာ ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုပြီး လေ့လာကြပါ။
Last edited by g00gle; 26-10-2011 at 05:43 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 14 ဦးတို့မှ g00gle အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နီထွန်းဦး, သန့်ဇင်ဌေး, ကောင်ပေါက်စ, မောင်သံသရာ, bagothar85, htinlinn, iPod, lu soe, mmkyioo, phoelapyaee, thureinsoe, tu tu, Zin Zin Win, zo
28-10-2011, 08:26 PM
ကျနော်က မြန်မာပြည်ကပါ မြန်မာပြည်မှာက အင်တာနက်လိုင်းကို Proxy ထည့်သုံးမှရပါတယ်(MPT လိုင်းယူထားလို့ပါ)။System Settings > Network > Network Proxy > Method မှာ Manual ထားပြီး HTTP,HTTPS,FTP,Socks တွေမှာ ကျနော် Proxy ထည့်ပေမဲ့ Update Manager ကော Software Center ကော ဒေါင်းလုို့မရပါဘူး။Firefox မှာတော့ Proxy Manual ထားသုံးကြည့်တော့ Webpage တွေတက်ပါတယ်ခင်ဗျ ဘယ်နေရာများလွဲနေလဲမသိလို့ ဖြေကြားပေးပါအုန်း။
Last edited by ကောင်ပေါက်စ; 28-10-2011 at 08:33 PM..
မျိုးဟန်ထက်, မောင်သံသရာ, g00gle, htinlinn, zo
28-10-2011, 11:53 PM
MPT လိုင်းတော့ မသုံးဖူးလို့ မပြောတတ်ဘူး။ ပုံမှန်ဆိုတော့ ရသင့်တာ။
Download Server ကြောင့်လား၊ MPT ကြောင့်လား မသိဘူး။
Dash Home >> Terminal ကနေ
လို့ ရိုက်ရင်ကော ဘာပြလဲ မသိဘူး။
ကို DaweiThar Blog မှာတော့ Update လုပ်ရင် Error ရှိတယ် ပြောတယ်။ တစ်ခုဝင်ပြင်ပေးရတယ်တဲ့။
ကျွန်တော် ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားတဲ့ CD မှာတော့ အဲဒီလို မဖြစ်ဘူး။
လုပ်လို့ ရနိုး စမ်းကြည့်ပါ။
Last edited by g00gle; 29-10-2011 at 12:01 AM..
မိုးပွင့်, မျိုးဟန်ထက်, သန့်ဇင်ဌေး, ကောင်ပေါက်စ, မောင်သံသရာ, bagothar85, htinlinn, mmkyioo, PyaitSone, zo
01-11-2011, 01:06 PM
Wubi နဲ့ သွင်းပြီး Windows Partition ကို မတွေ့ရရင် စိတ်တော့ မပူပါနဲ့။ Windwos Partition က ဖိုင်တွေကို Wubi ကနေ ယူသုံးလို့ ရပါတယ်။
Home Folder >> File System >> host
ဖိုဒါအောက်မှာ C: က ဖိုင်တွေ ရှိပါတယ်။
Documents, Pictures, Downloads, Music, Videos စတဲ့ ဖိုဒါတွေကို
Home Folder >> File System >> host >> Users >> ကွန်ပျူတာနာမည်
Wubi files ကို ၀င်းဒိုးကနေ ဖတ်ချင်ရင် ဆော့လ်ဝဲလိုပါတယ်။
Wubi ကနေ Partition တစ်ခုကို ဘယ်လို ပြန်ပြောင်းလဲ ဆိုတာလဲ အဲဒီလင့်မှာ ရှိပါတယ်။ စာတော့ နည်းနည်းဖတ်ပြီး ကလိရဲဖို့တော့ လိုပါတယ်။ မလုပ်ခင်တော့ Data တွေ Backup လုပ်ထားပါ။
မျိုးဟန်ထက်, သန့်ဇင်ဌေး, bagothar85, htinlinn, mmkyioo, pannuko, tu tu, zo
10-11-2011, 12:36 AM
Ubuntu 11.10 မှာ Themes တွေ ပြောင်းပါမယ်။ အရင်ကလို Desktop >> Right Click >> Change Background ကနေ Theme အသစ်တွေ လွယ်လွယ် Install လုပ်လို့ မရတော့ပါဘူး။ Software သုံးရင်သုံး၊ မဟုတ်ရင် Terminal ကနေ ပြောင်းရပါမယ်။ Terminal ကဆိုပေမဲ့ အလွန်ဆုံး ၃ ကြောင်းပဲ ရိုက်ရမှာပါ။ လွယ်ပါတယ်။
ပထမဆုံး Ubuntu Themes အကြောင်း သိထားဖို့ လိုပါတယ်။ Ubuntu Themes မှာ 1. GTK Theme 2. Metacity Theme (Windows Border) 3. Icon Theme ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ GTK Theme နဲ့ Metacity Theme ကိုတော့ File System >> usr >> share >> themes မှာ သိမ်းထားပါတယ်။ Icon Theme ကိုတော့ themes ထဲမှာ သို့မဟုတ် File System >> usr >> share >> icons မှာ သိမ်းပါတယ်။
GTK Theme, Metacity Theme ကို ပုံနဲ့ ပြရရင် မြှားအစိမ်းနဲ့ ပြတာ ၂ ခုက GTK Theme ပါ။ မြှားအမဲနဲ့ ပြထားတာက Metacity Theme (Windows Border Theme)။ မြှားအပြာနဲ့ ပြထားတဲ့ ထိပ်ဆုံးက အတန်းကို Panel လို့ နာမည်သတ်မှတ်ပါတယ်။
Themes ပြောင်းဖို့ ပထမဆုံး Home Folder >> File System >> usr >> share >> themes မှာ ၀င်ကြည့်လိုက်ပါ။ Ambiance, Radiance, High Contrast, High Contras Inverse အပြင် တခြား Theme တွေလဲ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ တခြား Themes ဖိုဒါတွေကို ၀င်ကြည့်လိုက်ရင် သူ့မှာပါတဲ့ Theme အမျိုးအစားကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ -- Clearlooks ကို ၀င်ကြည့်ရင် gtk-2.0 Theme ပဲတွေ့ပါမယ်။ Crux ဖိုဒါကို ၀င်ကြည့်ရင်တော့ gtk-2.0 အပြင်၊ metacity-1 Themes ပါတွေ့ရပါမယ်။ ဘာ Themes ရှိလဲ သိပြီးရင် Theme ပြောင်းလို့ရပါပြီ။
Theme ပြောင်းဖို့ Dash Home >> Terminal ကို ၀င်လိုက်ပါ။
GTK Theme ပြောင်းဖို့ အတွက် Terminal မှာ အောက်ကလို ရိုက်ထဲ့ပါ။ Enter လုပ်ပါ။ Termianl မှိန်သွားပြီး GTK Theme ပြောင်းသွားတာ တွေ့ရပါမယ်။ Terminal ကို ထွက်လိုက်ပါ။ 'Clearlooks' ဆိုတဲ့နေရာမှာ File System >> usr >> share >> themes ထဲမှာ ရှိတဲ့ ဖိုဒါ နာမည်ကို ရိုက်ရပါမယ်။ အဲဒီဖိုဒါထဲမှာ gtk ဆိုတာမျိုး ရှိဖို့တော့ လိုပါတယ်။
ဒါဆို GTK Theme ပြောင်းသွားပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ Windows Border (Metacity Theme) က မပြောင်းလို့ ကြည့်လို့ မကောင်းပါဘူး။ ဒီတော့ Metacity ရှိတဲ့ Theme နဲ့ Windows Border ကို ပြောင်းပါမယ်။ Dash Home >> Terminal ကို ဖွင့်ပါ။ ပြီးတော့ အောက်က အတိုင်း ရိုက်ထဲ့ပါ။
gconftool-2 --set --type string /apps/metacity/general/theme 'Crux'
Enter နှိပ်ပါ။ 'Crux' နေရာမှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ metacity ပါတဲ့ Themes ဖိုဒါ နာမည်ကို ရိုက်ထဲ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါဆို GTK Theme ကော၊ Windows Border Theme ကော ပြောင်းသွားပါပြီ။ ကျွန်တော်က နမူနာဖြစ်တဲ့အတွက် သိပ်မလှပါဘူး။
Icon ပြောင်းချင်ရင် ဒီအတိုင်းပဲ Terminal မှာ
gsettings set org.gnome.desktop.interface icon-theme 'Theme_Name'
လို့ရိုက်ပေးရပါမယ်။ 'Theme_Name' ဆိုတဲ့နေရာမှာ Icons ဖိုဒါ နာမည်ကို apostrophe ကြားထဲ ရိုက်ပေးရပါမယ်။
Theme ပြောင်းတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ မကြိုက်ရင် နဂိုအတိုင်း ဘယ်လို ပြန်ပြောင်းမလဲ။ Desktop မှာ Right Click >> Change Desktop Background >> အောက်ဆုံးက Themes to be used for UI မှာ Ambiance ကို ရွေးပေးလိုက်ရင် အရင်အတိုင်း ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် Themes လှလှလေးတွေ ရချင်တယ်။ http://gnome-look.org/ ကို သွားလိုက်ပါ။ ဘယ်ဘက်က Artworks ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Themes ကို ရွေးပါ။ GTK 3.x ကနောက်ပိုင်း GTK Theme ပါ။ Metacity ကတော့ Metacity Theme ပေါ့။ တချို့ Theme တွေက GTK, Metacity, Icon Themes အားလုံးစုပေးထားပါတယ်။ တချို့ကတော့ ပြန့်ကြဲနေပြီး တစ်ခုချင်း လိုက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရတယ်။ ကျွန်တော် အခု GTK 3.x -- Highest Rated ထဲက Zukitwo Theme ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။
Zip File (Tar.gz File) နဲ့ ရလာရင် Right click >> Extract Here လုပ်လိုက်ပါ။ ဖိုဒါတစ်ခု ရလာပါမယ်။ ဖိုဒါကို ၀င်လိုက်ပါ။ အထဲမှာ Zukitwo, Zukitwo-Dark, Zukitwo-Resonance, Zukitwo-Shell ဆိုပြီး ဖိုဒါတွေ့ပါမယ်။ Zukitwo ကိုဝင်ကြည့်လိုက်ပါ။ gtk, metacity, unity တွေ တွေ့ပါမယ်။ ဒါဆို ဒီ Theme ဖိုဒါကို သုံးလို့ရပါတယ်။
Termianl ကို ဖွင့်ပါ။ sudo nautilus လို့ရိုက်ပါ။ Password ရိုက်ပါ။ Home Folder ပွင့်လာရင် File System >> usr >> share >> themes ကို ခုနက Zukitwo ဖိုဒါကို Copy, Paste လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် အားလုံး ပြန်ပိတ်လိုက်ပါ။
Terminal ကို ဖွင့်ပါ။ ပြီးရင် အထက်က နည်းတွေအတိုင်း Theme Name မှာ Zukitwo လို့ ရိုက်ပြီး ပြင်ပါမယ်။ GTK, Metacity Themes ၂ ခုလုံး ပါလာတဲ့အတွက် Clearlooks, Crux လို ၂ မျိုး ရိုက်ဖို့ မလိုပါဘူး။ Zukitwo ဆိုတဲ့ နာမည်ဆို ရပါပြီ။ Terminal မှာ အောက်ကလို ရိုက်လိုက်ပါ။
gsettings set org.gnome.desktop.interface gtk-theme 'Zukitwo'
gconftool-2 --set --type string /apps/metacity/general/theme 'Zukitwo'
ဒါဆို လှလှပပ Theme တစ်ခု ရလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Panel အရောင် မဲနေတာ မကြိုက်ရင် Compiz Config Settings Manager မှာ Panel Opacity ကို လျှော့ပစ်လိုက်ပါ။ တော်တော် လှတဲ့ Theme တစ်ခုပါ။
Last edited by g00gle; 10-11-2011 at 12:46 AM..
ကိုသီဟကြီး, နီထွန်းဦး, သန့်ဇင်ဌေး, မောင်သံသရာ, bagothar85, htinlinn, iPod, KznT, mmkyioo, pannuko, PyaitSone, zo
Ubuntu နဲ့ Zawgyi + Unicode + Ayar Keyboard
ပထမဆုံး u4mm.com (Ubuntu Myanmmar Loco Team) ရဲ့ mm-kb.deb ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။ Downloads ဖိုဒါထဲရောက်အောင် လုပ်လိုက်ပါ။
Terminal ကို ဖွင့်ပါ။ အောက်ကအတိုင်း ရိုက်ထဲ့ပါ။
(ls လို့ ရိုက်လိုက်ရင် mm-kb.deb ဆိုတာ တွေ့ရပါမယ်။ Download Manager ကြောင့် နာမည်ပြောင်းသွားရင်လဲ ပြောင်းသွားတဲ့ နာမည်ကို မှတ်ထားပါ။)
sudo dpkg -i mm-kb.deb
လို့ ရိုက်ထဲ့ပါ။ Password ရိုက်ပါ။ (တကယ်လို့ အထက်က ls ရိုက်လို့ တခြား နာမည်နဲ့တွေ့ရင် sudo dpkg -i နောက်မှာ တခြားနာမည်ကို ရိုက်ပေးရပါမယ်။ ဥပမာ - ls ရိုက်လို့ mmkb.deb တွေ့ရင် >> sudo dpkg -i mmkb.deb လို့ ရိုက်ပေးရပါမယ်)
username@ubuntu:~/Downloads$ လို့ ပြန်တွေ့ရရင် Terminal ကို ပိတ်လိုက်ပါ။ Keyboard ကို သွင်းလို့ ပြီးသွားပါပြီ။ Keyboard ကို သုံးဖို့အတွက် Dash Home >> Ibus ကို ၀င်လိုက်ပါ။ Panel ဘယ်ဘက်ထိပ်မှာ Keyboard ပုံတွေ့ရပါမယ်။ တချက်နှိပ်ပြီး - Preferences >> Input Method Tab ကို ရွေးပါ။ Select an input method ကို နှိပ်ပါ။ Burmese ကို ရွေးပြီး ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Keyboard ကို ရွေးပါ။ ပြီးရင် Add ကို နှိပ်ပါ။ ဒါဆို ကီးဘုတ် သုံးလို့ ရပါပြီ။ mm-zawgyi, mm-myanmar3, mm-ayar ကိုယ်ကြိုက်တာ သုံးနိုင်ပါတယ်။
Shortcuts ကို ပြင်ချင်ရင် General Tab ကို သွားပြီး Keyboard Shortcuts >> Enable or disable >> ... ဆိုတဲ့နေရာကနေ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Shortcut ပြင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီ Keyboard ကို မကြိုက်တဲ့အချက်က myanmar 3, zawgyi, ayar Fonts3မျိုးလုံး သွင်းလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Ubuntu မှာ Encoding မတူတဲ့ Fonts ၃ ခု ရောထွေးပြီး စာရိုက်ရင် အမှန် မထွက်တာ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မလိုတဲ့ Fonts ကို Delete လုပ်ပြီး၊ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ font ကို အထက်ကနည်းအတိုင်း အလွယ်တကူ သွင်းနိုင်ပါတယ်။
Terminal ကို ဖွင့်ပါ။
Home Folder ပွင့်လာရင် File system >> usr >> share >> fonts >> mm ဖိုဒါထဲက မလိုချင်တဲ့ Font ကို Delete လုပ်လိုက်ပါ။ အကုန်လုံးဖျက်ပြီး ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Update Font ကို သွင်းချင်တယ်ဆိုလဲ ရပါတယ်။
နောက် Keymagic, တခြား Keyboard တွေလဲ ရှိပါသေးတယ်။ u4mm ရဲ့ mm-kb.deb က သွင်းရအလွယ်ဆုံး ထင်လို့ ဒီနည်းပဲ ရေးလိုက်တာပါ။
မျိုးဟန်ထက်, သန့်ဇင်ဌေး, မောင်သံသရာ, ငြိမ်းချမ်း, bagothar85, htinlinn, iPod, KznT, mmkyioo, mr.jittwo, pannuko, PyaitSone, Thura Htet, tu tu, zo
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Nov 2011
ပို့စ်3ခုအတွက် 13 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အွန်ဘန်တူ 10.10 (Pinguy O.S) ကိုသုံးနေပါတယ်။ 11.10 ကို တင်ရင် လက်ရှိသုံးနေတာတွေ (softwares) မပြောင်းရအောင် upgrade install လုပ်လို့ရနိုင်ပါသလားခင်ဗျား၊၊
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ NyanMoeMyint အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, g00gle, htinlinn, pannuko
Find More Posts by NyanMoeMyint
10-11-2011, 11:22 AM
Pinguy OS က Ubuntu မှာ အခြေခံထားပေမဲ့ Ubuntu စစ်စစ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Ubuntu လို့တော့ မခေါပါဘူး။ Linux Mint ကလဲ Ubuntu ကို အခြေခံထားတဲ့ OS ပါပဲ။ Ubuntu ကို အခြေခံပြီး Tweak လုပ်ထားတဲ့အတွက် Ubuntu ကို ပြောင်း Upgrade လုပ်ရင်တော့ Errors တွေ ပေးဖို့ များပါတယ်။
Pinguy OS forum မှာ ရေးထားတာကတော့ Pinguy 10.10 ကနေ Ubuntu 11.04 ကို Upgrade လုပ်လို့ ရတယ် ပြောပါတယ်။ Ubuntu CD နဲ့ သုံးရင် Upgrade လုပ်ဖို့ Option ပါတယ် ပြောပါတယ်။ Pinguy to Ubuntu 11.10 တော့ မတွေ့မိပါဘူး။
ရိုးရိုး Pinguy to Pinguy, Ubuntu to Ubuntu Upgrade လုပ်ရင် ဆော့ဝဲတွေ ကျန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Version ပြောင်းသွားလို့ တချို့ software တွေ အလုပ်လုပ်ချင်မှ လုပ်ပါမယ်။ Upgrade လုပ်တာက ရိုးရိုး Install လုပ်တာထက် အချိန်ပိုကြာပါတယ်။ Upgrade လုပ်တုန်း Software တွေ ချန်မလား၊ ဖျက်မလား ရွေးတဲ့ Option ပါပါတယ်။
Pinguy to Ubuntu Upgrade ကတော့ Fail ဖြစ်ဖို့ ပိုများပါတယ်။ သေချာတော့ မသိပါဘူး။ စမ်းကြည့်ချင်ရင် အထက်က Pinguy OS ဖိုရမ်မှာ သွားမေးကြည့်ပါ။ Pinguy OS 11.10 လဲ မကြာခင် ထွက်တော့မှာပါ။
၂ ခုလုံးက DEB ဆော့ဝဲကို အခြေခံလို့ Software တွေ Backup, Restore ရကောင်းလဲ ရနိုင်ပါတယ်။ စမ်းကြည့်ချင်တယ် ဆိုရင် Ubuntu 11.10 Live USB မှာ စမ်းကြည့်ပါ။ Remastersync Backup software သို့မဟုတ် AptonCD (Software Center မှာရှိပါတယ်) နဲ့ Pinguy 10.10 က softwares တွေ Backup လုပ်ပြီး Ubuntu 11.10 Live USB မှာ ပြန် Restore လုပ် စမ်းကြည့်ပါ။ ဆော့ဝဲများလို့ USB နဲ့ မဆံ့တောင် ဆော့ဝဲ တစ်ခု၊ နှစ်ခု စသဖြင့် နည်းနည်း စမ်းကြည့်ပါ။ အားလုံး အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ Partition တစ်ခု သီးသန့်လုပ်၊ Ubuntu 11.10 တင်။ Pinguy ကနေ Backup လုပ်ထားတဲ့ Software တွေ Restore လုပ်ပါ။ Ubuntu 11.10 မှာ အဆင်ပြေတယ်ဆိုမှ Pinguy ကို မလိုချင်ရင် ပြန်ဖျက်လိုက်ပါ။
ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရ အဆင်မပြေတာရယ်၊ စမ်းဖို့ အချိန်လဲ မရှိလို့ စမ်းသပ်မပေးနိုင်တာ ခွင့်လွှတ်ပါ။ အကောင်းဆုံးက Pinguy OS Forum သို့မဟုတ် Ubuntu Forum မှာ သွားမေးကြည့်ပါ။ Pinguy Forum မှာ သွားမေးရင်တော့ စိတ်ဆိုးမလားပဲ။
နောက် ရိုးရိုး Upgrade တောင် အခန့်မသင့်ရင် Fail ဖြစ်ပါတယ်။ Pinguy မှာ ဆော့ဝဲတွေ တခါထဲပါလို့ အဆင်ပြေရင် Pinguy 11.10 ထွက်မှ Pinguy 11.10 ကို Fresh Installation လုပ်တာ အကောင်းဆုံး ထင်ပါတယ်။
Last edited by g00gle; 10-11-2011 at 11:27 AM..
နီထွန်းဦး, မျိုးဟန်ထက်, သန့်ဇင်ဌေး, မောင်သံသရာ, bagothar85, htinlinn, iPod, KznT, mmkyioo, pannuko, PyaitSone, tu tu
15-11-2011, 11:33 PM
ဒီနေ့ Ubuntu ဖွင့်လိုက်တော့ Desktop မှာ ဘာမှ မတွေ့ရတော့ဘူး။ Launcher တွေလဲ၊ အကုန်ပျောက်။ Panel Bar လေး တစ်ခုပဲ ကျန်တယ်။ ဒါတောင် နာရီ၊ Wireless ပုံလေး၊ Logout button ဘာဆိုဘာမှ မရှိဘူး။ ဘာမှလဲ မလုပ်မိပါဘူး။ 2D ၂ ရက်လောက် ပြောင်းသုံးတာပဲ ရှိတာ။ Desktop Menu ကျန်သေးတော့ Go >> Home Folder >> File System >> usr >> share >> applications ကနေ Terminal ကို ဖွင့်လိုက်တယ်။ Terminal ကနေ
လို့ ရိုက်လိုက်ပြီး ခဏ စောင့်လိုက်တယ်။ အားလုံး ပြန်ကောင်းသွားတယ်။
unity --reset-icons ဆိုရင်တော့ Launcher Icons တွေပါ နဂို ပြန်ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးတယ် ပြောတယ်။ ကျွန်တော်တော့ မသုံးလိုက်ရပါဘူး။ unity --reset နဲ့ အကုန်ပြန်ကောင်းသွားတာ။
Compiz/Unity Crash ဖြစ်ခဲ့ရင် ပိုပြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရေးထားတဲ့ နေရာကို သွားဖတ်ပေးပါ။
Last edited by g00gle; 30-11-2011 at 11:37 AM..
မျိုးဟန်ထက်, မောင်သံသရာ, bagothar85, htinlinn, htoo war, iPod, KznT, mmkyioo, pannuko, PyaitSone, thureinsoe, tu tu
24-11-2011, 12:08 PM
ဒီနေ့ Tip တစ်ခု တွေ့လို့။ အရင်က ခက်နေတဲ့ Offline Install လုပ်ဖို့ အရမ်းလွယ်သွားပြီ။ ပို့နံပါတ် 11 ရဲ့ အဆက်ပါ။ အရင်က ကျွန်တော်က Packages Download လုပ်နည်းပဲ သိတယ်။ Install လုပ်နည်း မသိဘူး။ Synaptic Package Manager နဲ့ သွင်းရင် တခါတလေ Packages အစုံမပါဘူး။ Terminal ကသွင်းပြန်ရင်လဲ software တစ်ခုချင်းရဲ့ နာမည်ကို List လုပ်ရတယ်။ တခါတလေ error ပြတယ်။ Synaptic နဲ့ Terminal မှာ Error ပြတာက ဘာကြောင့်မှ မဟုတ်ဘူး။ Install လုပ်တဲ့ အစီအစဉ်လွဲနေလို့ ဖြစ်တာ။ အခု ပိုကောင်းတဲ့ နည်းတစ်ခု သိသွားပြီ။ Folder ထဲက DEB Files အားလုံးကို Terminal ကသွင်းတာ။
ပို့နံပါတ် 11 ကို ဆက်ဖတ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ VLC သွင်းချင်ရင် အရင်ဆုံး Mediafire က VLC packages တွေကို အရင် ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။ Zip ဖိုင်ကို Right click >> Extract Here လို့ လုပ်လိုက်ပါ။ vlc ဆိုတဲ့ ဖိုဒါတစ်ခုနဲ့ ဖိုင်တွေ ထွက်လာပါမယ်။ တကယ်လို့ folder ထဲမှာ DEB files မဟုတ်ပဲ text ဖိုင်လို ပုံစံမျိုးတစ်ခုပါလာရင် ဖျက်ပစ်လိုက်ပါ။ (ပါမပါ ကျွန်တော် မမှတ်မိတော့လို့ပါ)။ vlc ဆိုတဲ့ folder ကို Downloads ထဲ ကူးထဲ့လိုက်ပါ။
နောက် Dash Home >> Terminal ကို ဖွင့်ပြီး
Enter နှိပ်ပါ။ နောက်
sudo dpkg -i *.deb ဆိုပြီး ရိုက်ပါ။ ( -i အနောက်မှာ Space တစ်ခုခံ၊ ပြီးရင် *.deb လို့ ရိုက်ရမှာပါ)
Enter နှိပ်ပါ။ Password ရိုက်ပါ။ ဒါဆို VLC ကို Install လုပ်သွားပါမယ်။ package နာမည်တွေကို သီးသန့် ရိုက်ဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။ Packages တွေကို အရင်ဆုံး Unpack လုပ်တဲ့အတွက် ဘယ်ဟာ အရင်သွင်းရမလဲ ကွန်ပျူတာက အလိုလို ဆုံးဖြတ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တခြား Ubuntu Restricted Extras တို့လဲ ဒီနည်းနဲ့ သွင်းလို့ ရတာတွေ့ပါတယ်။ အဆင်ပြေရင် Packages တွေ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး တင်ပေးပါမယ်။ Offline ကတော့ တော်တော်လေး အဆင်ပြေသွားမယ် ထင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ Windows လိုမျိုး ၂ ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ Install လုပ်ပေးမဲ့ Scipt ကူးချင်ရင် http://unyukid.web.id/ မှာ ရှိပါတယ်။ လောလောဆယ်ဆယ် ကျွန်တော် ၀င်လို့ မရဖြစ်နေလို့ URL အတိအကျ မပေးနိုင်ပါ။ Ubuntu 11.10 Codecs ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်လိုက်ရင် အဲဒီထဲမှာ Script ပါပါတယ်။ oneiric ဆိုတဲ့ ဖိုဒါထဲကို ကိုယ်သွင်းချင်တဲ့ packages (DEB files) တွေ ကူးထဲ့ပြီး၊ Install ဆိုတဲ့ ဖိုင်ကို Right Click >> Properties >> Permissisons >> Allow executing as program ကို အမှန်ခြစ်ပေး၊ နောက် Install ဖိုင်ကို Right Click >> Open >> Run in terminal ဆိုပြီး ရွေးပေးရင် Windows မှာလို လွယ်လွယ်ကူကူ Install လုပ်လို့ရပါတယ်။
Packages files တွေနဲ့၊ Install Script file ကို ကျွန်တော် နောက်ကျမှ တင်ပေးပါမယ်။ လောလောဆယ်ဆယ်တော့ 32 bit အတွက်ပဲ ရပါဦးမယ်။ 64 bit သုံးနေတဲ့သူများ Package Download Script ထုတ်ပေးကြပါဦး။
Last edited by g00gle; 24-11-2011 at 12:09 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 11 ဦးတို့မှ g00gle အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလင်း1z, မျိုးဟန်ထက်, မောင်သံသရာ, bagothar85, htinlinn, iPod, KznT, mmkyioo, pannuko, PyaitSone, tu tu
25-11-2011, 12:53 PM
Ubuntu 11.10 32-bit အတွက် Packages တွေပါ။ Install လုပ်ဖို့ Downloads မှာ Folder တစ်ခု လုပ်ပါ။ Packages တွေကို အဲဒီ Folder ထဲကူးပါ။
Dash Home >> Terminal
cd ~/Downloads/NewFolder [NewFolder နေရာမှာ ဖိုဒါ အသစ်နာမည် ရိုက်ထဲ့ပါ။ ဖိုဒါနာမည်ကို Space မခံရင် ပိုကောင်းပါတယ်။]
ဒါဆို Install လုပ်သွားပါမယ်။ မသိရင် အရင်ပို့စ်ကို ပြန်ဖတ်ပါ။
mp3 ဖွင့်ဖို့ Gstreamer fluendo mp3 (အရင် posts မှာ ပါပြီးသားပါ။)
Video Codec တွေ သွင်းချင်ရင် သူများလုပ်ထားတဲ့ဟာ http://unyukid.web.id/ubuntu-codecs-...ine-installer/ မှာ ရှိပါတယ်။ Mirror Links အနေနဲ့ အောက်မှာလဲ ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Install ဆိုတဲ့ ဖိုင်ကို Right Click >> Properties >> Permissions >> Allow executing as programs ကို အမှန်ခြစ်ပါ။ နောက် Right Click >> Open >> Run in Terminal
Codec + VLC
CHM file တွေ ဖတ်ဖို့ CHMSee (146 KB)
ISO/Image file တွေကို Mount လုပ်ဖို့ Furius ISO Mount (Daemon Tools, Virtual Drive လို) (179 KB)
Compiz Setting ပြင်ဖို့ Compiz config settings manager (4.41 MB)
Photoshop အလားတူ Image Editing Software - GIMP (7.61 MB)
Screenshot/Image Editor လုပ်ဖို့ Shutter (11.91 MB)
Dock သုံးဖို့ Avant Windows Manager (16.62 MB)
Themes, Fonts အလွယ်တကူ ပြင်ဖို့ Gnome Tweak Tool (25.69)
PDF Edit/Split & Merge လုပ်ဖို့ - PDF Chain နဲ့ PDF Editor (တခြား software တွေ ချန်ထားခဲ့ပါတယ်) - (26.46 MB)
Video Editing အတွက် Openshot (41.62 MB)
Webcam Effects တွေနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ Cheese (51.16 MB)
Ubuntu Restricted Extras လဲ လုပ်ထားပါတယ်။ ဖိုင် Size က 100 MB လောက် ရှိပါတယ်။ Codec, Java, Microsoft fonts ပဲ ပါတာမို့ သိပ်မထူးခြားဖူး ထင်တာနဲ့ မတင်တော့ပါဘူး။ လိုချင်ရင် ပြောပါ။ တခြား လိုချင်တဲ့ Software ပြောကြည့်ပါ။ လုပ်လို့ရရင် တင်ပေးပါမယ်။
GIMP က Plugins, Documentation ဘာမှ မပါပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ Photo Edit လုပ်လို့တော့ ရပါတယ်။ Plugins က ဘာတွေ သွင်းရမှန်း မသိတာရယ်၊ ဖိုင်ဆိုဒ် အရမ်းကြီးသွားတာရယ်ကြောင့် မထည့်ထားတာပါ။ Plugins လိုချင်ရင် Plugins တွေ့သလောက် ထည့်ပြီး တင်ပေးပါမယ်။
CHMSee ကစပြီး နောက်ပိုင်း ဖိုင်တွေကို ဖိုဒါနာမည် 1 လို့ပဲပေးပြီး deb files တွေ စုထားပါတယ်။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး၊ Downloads ဖိုဒါထဲကို 1 ဆိုတဲ့ ဖိုဒါကို ကူးပါ။ နောက် Dash Home >> Terminal
ဆိုရပါပြီ။ တခုသွင်းပြီးရင် 1 ဆိုတဲ့ ဖိုဒါကို တခြားနေရာကို Cut လုပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆို နောက်ပိုင်း ဆော့ဝဲအားလုံးကို ဒီ Command နဲ့ သွင်းလို့ ရပါမယ်။
Software တွေကို 32 bit Ubuntu 11.10 Live USB မှာ စမ်းသပ်ထားပါတယ်။ စမ်းသပ်ပြီး သုံးလို့ မရရင်လဲ ပြန်ပြောပေးပါ။ ဒီ Packages တွေရဲ့ ကောင်းကွက်က Ubuntu မှာ ဘာမှမသွင်းပဲ သုံးနိုင်ပါတယ်။ Dependencies ဖိုင် အကုန်ပါအောင် လုပ်ထားပါတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဆော့ဝဲသွင်းရုံပါပဲ။ မကောင်းတာက ဖိုင်တစ်ခုခြင်း အလုပ်လုပ်အောင် လုပ်ထားလို့ ဆော့ဝဲအားလုံး သွင်းရင် ဖိုင်တွေ ထပ်နေတာ ရှိပါတယ်။ ပြဿနာ ကြီးကြီးမားမားတော့ မရှိလောက်ဘူး ထင်တာပါပဲ၊ သေချာတော့ မသိပါ။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရတာ ဆိုဒ်ပိုများသွားပါမယ်။
Last edited by g00gle; 25-11-2011 at 03:46 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ g00gle အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလင်း1z, မျိုးဟန်ထက်, မောင်သံသရာ, ငြိမ်းချမ်း, bagothar85, htinlinn, iPod, pannuko, tu tu
26-11-2011, 06:20 AM
အစကWubiနဲ့သုံးနေတာကိုဂူရေသိပ်ပီးတော့အကြိုက်မတွေတာနဲ့Partitionခွဲပြီးသပ်သပ်တင်သုံးလိုတ်တယ်။FireFoxမှာTab တွေအများကြီးဖွင့်၊သီချင်းလည်းနားထောင် ဟိုဟာကလိဒီဟာကလိ နဲ့မလေးပဲခံနိုင်မလား။ အဲဒါနဲ့ Ubuntu ISOကို အခွေဘန်းပြီးတင်တာ error တတ် လာသေးတယ်။ ပြီးတော့ Try Nowနဲ့ Live တတ်ပြီးတောတင်တာဆိုတော့အခွေနဲ့ကတော်တော်လေးကို လေးပင်နေတာပဲ၊အဲဒါနဲ့ကိုယ်မှာ မန်မိုရီစတစ်(စ်)တွေပေါတယ်လေ။ ဒီကောင်လေးနဲ အဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုပါတော့။
အပေါ်မှာ ကိုဂူတင် ပေးထားတာတွေ အလုံး အဆင်ပြေနေပြီ သုံးလို။ ဒါပေမဲ့လေခုတစ်ခုလိုနေတယ်စာတွေလိုတ်ဖတ်ရင်း နဲ့ မသိတဲစလုံးလေးတွေ English to Myanmar Dictionary လေးကြည်ချင်နေတယ်။ ကိုbagothar85 ဒီမှာ တင်ပေးထားတာ ကြိုးစားကြည်ပြီးသွားပီ အဆင်သိပ်မပြေဘူး
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ မျိုးဟန်ထက် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, ငြိမ်းချမ်း, g00gle, htinlinn, iPod, KznT, pannuko
26-11-2011, 07:47 AM
Originally Posted by မျိုးဟန်ထက်
ဘယ်နေရာမှာ အဆင်မပြေဖြစ်နေတာလဲ မသိဘူး ကိုမျိုးဟန်ထက်ခင်ဗျာ။ သုံးရတာကို မကြိုက်တာလား? ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုခု လုပ်မရဖြစ်နေတာလား မသိဘူး။ အစ်ကို ဖြစ်နေတာလေးကို ပြောပြပေးမယ်ဆိုယင် သိတဲ့အစ်ကို၊အစ်မတွေ ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ပိုစ့်က ကျွန်တော် Linux Mint မှာ စမ်းထားတာပါ။ တခြားဟာတွေနဲ့တော့ မစမ်းကြည့်ရသေးပါဘူး အစ်ကို။ အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ bagothar85 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မျိုးဟန်ထက်, မောင်သံသရာ, g00gle, htinlinn
26-11-2011, 08:43 AM
http://tarateam.com/ လေး စမ်းကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်တော့ တခါမှ မသုံးဖူးပါဘူး။ သုံးလို့ ရမယ်လို့တော့ ထင်ပါတယ်။ သာလွန်ရဲ့ Star Dictionary လဲ သုံးလို့ ရကောင်းရနိုင်ပါတယ်။ MyanmarL10n Team သို့မဟုတ် ကိုသူရလှိုင် ကို မေးကြည့်ပါ။
Last edited by g00gle; 26-11-2011 at 08:48 AM..
မင်းနိင်, မျိုးဟန်ထက်, မောင်သံသရာ, bagothar85, htinlinn, kyawminkhoung, pannuko, tu tu
Ubuntu ( Linux ) FAQs ( Self-Study ) KznT Linux များ (သို့) Linux နှင့်ဆိုင်ရာများ 29 22-02-2013 12:27 PM
Ubuntu တင်ပြီး ဘာဆက်လုပ်မလဲ ?? KznT Linux များ (သို့) Linux နှင့်ဆိုင်ရာများ 14 29-12-2011 12:05 PM
Windows ပေါ်မှာ Ubuntulinux ကို ဘယ်လို Install လုပ်ပြီး run မလဲ။ poekaunglay87 Linux များ (သို့) Linux နှင့်ဆိုင်ရာများ 22 24-06-2011 12:52 AM
Natty Narwhal - Unity နှင့် ကျွန်တော် KznT Linux များ (သို့) Linux နှင့်ဆိုင်ရာမျာ3း15-05-2011 07:19 PM
ဘာလို့ Ubuntu သုံးသင့်လဲ ..?? kyaukphyu Linux များ (သို့) Linux နှင့်ဆိုင်ရာများ019-08-2010 04:09 PM
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 05:59 PM